कर छुट र शुन्य दर
कर छुट भनेको के हो ?
कर छुट भन्नाले त्यस्तो आपूर्तिलाई बुझाउंछ जस अन्तर्गत बिक्रेताले न त मूल्य अभिबृद्धि कर संकलन गर्दछ न त आपूर्तिसंग सम्बद्ध खरिदमा उसले तिरेको कुनै कर कटृी दावी गर्न सक्छ । करछुटको कारोवार गर्नेले दर्ता पनि गर्नु पर्दैन ।
कुन कुन वस्तुमा कर लाग्छ ?
मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवाको बाहेक देहायका कारोवारमा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ :-
नेपाल भित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा,
नेपाल भित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
नेपाल बाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा,
कुन कुन वस्तुमा कर लाग्दैन र कर छुट छ ?
मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ ले छुट गरेका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिबृद्धि छुट
हुन्छ जस्तै :-
समूह १ आधारभूत कृषि उत्पादनहरू,
समूह २ आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरू,
समूह ३ जीवजन्तु तथा सोको उपज,
समूह ४ कृषि सामग्रीहरू,
समूह ५ औषधि उपचार र यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरू,
समूह ६ शिक्षा,
समूह ७ किताब, अखवार र मुद्रित सामग्रीहरू,
समूह ८ कलात्मक र कालीगढी सेवा,
समूह ९ यात्रुबाहक यातायात
समूह १० व्यावसायिक वा पेशागत सेवा,(लेखा परिक्षक महानगर, उप-महानगर र
नगरपालीमा कार्यालय ठेगाना राखेको वाहेक )
समूह ११ अन्य वस्तु तथा सेवा,
समूह १२ भवन र जग्गा,
समूह १३ वाजी, क्यिसनो र चिठ्ठा ।
मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवामा कर लाग्दैन । तसर्थ
माथिका वस्तु तथा सेवाहरुको व्याख्याका लागि ऐनको अनुसूची १ हेर्नुहोस ।
के करछुट हुने वस्तुसँग सम्बन्धित सेवामा कर लाग्दैन र कर छुट छ ?
मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएका वस्तु र सेवामा मात्र कर
के माटो खन्ने कार्य सम्बन्धी ठेक्कामा कर लाग्दैन ?
होइन । सो कार्य सेवा भएको र मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख नगरिएको सेवा भएकाले कर लाग्दछ ।
कर छुटको सामान विदेश निकासी गर्दा शून्य दरको सुविधा पाइन्छ ?
कुन कुन वस्तुमा शून्य दर आकर्षित हुन्छ ?
सामान्यतया नेपालबाहिर निर्यात हुने वस्तु र नेपालबाहिरको व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा । शून्य दर आकर्षित हुने बस्तु तथा सेवाहरुको विस्तृत सूची मू.अ.कर ऐनको अनुसूची – २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
कर फिर्ता पाउने सुविधा प्राप्त (कुटनीतिक) व्यक्तिलाई बीजक जारी गर्दा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
कर विवरण अनुसार तिर्नुपर्ने कर कहिलेसम्म तिर्नु पर्दछ ?
करदाताले प्रत्येक कर अवधिको कर सो अवधि समाप्त भएको मितिले पच्चिस दिन भित्र बुझाउनु पर्दछ । कर अवधि भन्नाले मासिक रुपमा कर विवरण बुझाउनु पर्ने करदाताको हकमा सो महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र, द्धिमासिकर चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउनु पर्ने करदाताको हकमा द्धिमासिकर चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र)
तोकिएको समय भित्र कर नतिरेमा के हुन्छ ?
म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर नबुझाएमा वांकी रहेको कर रकममा वार्षिक दश प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्दछ । थप दस्तुरका अतिरिक्त वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज समेत बुझाउनु पर्दछ । साथै यस ऐन बमोजिमको बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले म्यादभित्र नबुझाएमा महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिई सम्बन्धित कर अधिकृतले देहायका कुनै वा सबै तरिका अपनाई कर असुल गर्न सक्दछ :-
करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर ।
करदाताको चल तथा अचल सम्पति कब्जा गरेर ।
करदाताको सम्पूर्ण वा केही सम्पत्ति एकै पटक वा पटक पटक गरी सिलबन्दी वोलपत्र वा सार्वजनिक वढावढद्धारा लिलाम विक्री गरेर ।
बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कुनै संगठित संस्था वा स्थानीय तहहरुबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टा गर्न लगाएर ।
कुनै तेश्रो व्यक्तिले करदातालाई तिर्नुपर्ने रकम दावी गरेर ।
करदाताको आयात निर्यात र अन्य कारोवार रोक्का गरेर ।
नेपालबाहिर जान रोक लगाएर ।
मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कहाँ बुझाउनु पर्दछ ?
कर रकम बुझाउन तोकिएका बैँकहरू र निश्चित सीमा भन्दा कम रकमको हकमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा र आ.रा.का. नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र को.ले.नि.का.मा मू.अ.कर रकम दाखिला गर्न सक्नेछ ।
मू.अ.कर रकम जुनसुकै राजस्व खातामा बुझाए पनि हुन्छ ?
हुदैंन । तोकिएको राजस्व शीर्षक र बैंकमा नै बुझाउनु पर्दछ ।
कर रकम बुझाउने राजस्व खाताहरू कुनकुन हुन् ?
परामर्श तथा ठेक्का
संचार सेवा, विमा, हवाई उडान र अन्य सेवा
वेदर्तावाल मू.अ.कर रिभर्स चार्ज
मू.अ.कर रकम नेपालभरि जुनसुकै स्थानको राजस्व बुझ्ने बैंकमा बुझाए पनि हुन्छ ?
हुन्छ । तर तोकिएको राजस्व शीर्षक रआफु दर्ता भएको आ.रा.का. को कोड राखेर राजश्व वुझ्ने बैंकमा बुझाउनु पर्दछ । User नेम र Password छ भने अनलाइन पेमेन्ट गर्दा नि हुन्छ ।
कर रकम बुझाउने भौचर कर अधिकृतबाट प्रमाणित (दस्तखत) गराउनु पर्दछ ?
के Account Payee चेकबाट कर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । तर Account Payee चेकबाट जुनसुकै मितिमा कर रकम बुझाएको भए तापनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना नगरी खाताबाट घटाएको (debit) दिनलाई गणना गरिने हुँदा म्याद भन्दा ढिला जम्मा भएमा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्छ ।
मैले Account Payee चेकबाट कर रकम म्याद भित्रै बुझाएको थिए, बैँकले कर भुक्तानी गर्ने म्याद पछि (२६ गते) मेरो खाताबाट घटाएको रहेछ, के मैले थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्दछ ?
पर्छ । Account Payee चेकबाट जुनसुकै मितिमा कर रकम बुझाएको भए तापनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना नगरी खाताबाट घटाएको (debit) या राजश्व दाखिला दिनलाई गणना गरिने हुँदा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्छ ।
मैले Good For Payment चेकबाट कर रकम म्याद भित्रै बुझाएको थिए, बैँकले कर भुक्तानी गर्ने म्याद पछि (२६ गते) मेरो खाताबाट घटाएको रहेछ, के मैले थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्दछ ?
पर्दैन । Good For Payment चेकबाट म्याद भित्रै बुझाएको कर रकम जुनसुकै मितिमा debit गरेको भएपनि चेक बुझाएको दिनलाई गणना गरिने हुँदा थप दस्तुर, व्याज तिर्नु पर्दैन ।
काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले मैले कर रकम तोकिएको म्याद भित्र बुझाउन सकिन, के मैले करमा लाग्ने दस्तुर मिनाहा पाउन सक्छु ? पाउन सक्छु भने सोको प्रक्रिया के हो ?
करदाताले काबु बाहिरको परिस्थिति दर्शाई निवेदन गरेमा र व्यहोरा मनासिब देखेमा महानिर्देशकले ढीला भुक्तानीमा लाग्ने थपदस्तुर मात्र मिनाहा दिन सक्नेछन ।
कस्तो अवस्थालाई काबु बाहिरको परिस्थिति भनिन्छ ?
देहायको अवस्थालाई काबू बाहिरको परिस्थिति मानिन्छः–
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति बिरामी परी अशक्त भएमा निको भएको मितिले सात दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले क्रिया बस्नु परेमा क्रिया समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने महिला सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको मितिले पैंतीस दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा बौलाएमा वा बेपत्ता भएमा त्यस्तो भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र निजको हकवाला वा संरक्षकले निवेदन गरेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
बाढी, पहिरो, हिउँ वा अन्य त्यस्तै कारणबाट बाटो बन्द भै आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा आउन नसकेको अवस्थामा बाटो खुलेको मितिले सात दिनसम्म,
यातायातको साधन पूर्ण रुपमा बन्द भई आउन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो बन्द समाप्त भएको भोलिपल्ट सम्म ।
आगलागी, भुकम्प जस्ता दैवी विपत्तिका कारणले कावु वाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा सो विपत्ति परेको मितिले तीस दिन सम्म ।
मैले दाखिला गरेको भौचरमा भूलले राजस्व शीर्षक, खाता नं. स्थायी लेखा नं. फरक पर्‍यो, मैले के गर्ने ?
तपाईंले फरक परेको व्यहोरा खोली प्रमाण सहित कार्यालयको संकलन शाखामा निवेदन
दिनु पर्दछ । यदि स्थायी लेखा नम्वर फरक परेमा र फरक परेको स्थायी लेखा नम्वर
पनि दर्ता रहेछ भने यो रकमा मेरो होइन भन्ने घोषणा सहित संकलन शाखामा निवेदन
दिनु पर्दछ ।
मैले गत वर्ष आयकर वापत दाखिला गरेको भौचरमा भूलले मूल्य अभिवृद्धि करको राजस्व शीर्षक लेखिएछ, मैले के गर्ने ?
गत वर्षको भौचर केन्द्रीय हिसाब मिलान नगरुन्जेल सम्म (ढिलोमा यस आ.ब.को आश्विन मसान्त भित्र) सच्याउन निवेदन दिनु भएमा मात्र परिवर्तन गर्न मिल्छ । अन्यथा मिल्दैन । यस अवस्थामा आयकर वापत रकम बुझाई मूल्य अभिवृद्धि करको रकम आगामी कर अवधिमा मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कर निर्धारण आदेशबमोजिमको कर, थप दस्तुर र व्याजको रकम कति दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्छ ?
कर निर्धारण आदेशबमोजिमको कर, थप दस्तुर र व्याजको रकम सम्बन्धित करदाताले त्यस्तो आदेश प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
कर योग्य कारोवार र कर लाग्ने मूल्य
कर योग्य कारोवार भन्नाले कस्तो कारोवारलाई बुझाउँदछ ?
करयोग्य व्यक्तिले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गरेमा त्यसलाई करयोग्य कारोबार भनिन्छ । साथै करयोग्य वस्तु तथा सेवा विदेशबाट स्वदेशमा आयात गरेमा र नेपाल बाहिर निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोवारलाई पनि करयोग्य कारोवार मानिन्छ ।
कुन मूल्यमा कर असूल गर्नुपर्दछ ?
सामान्यतया नगद मात्र प्रतिफल भएको अवस्थामा बिक्रेताले क्रेतासँग लिएको मूल्यमा कर असूल गर्नु पर्दछ ।
के वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा मूल्यमा दिईएको डिस्काउण्ट, कमिशन वा यस्तै अन्य व्यापारिक छुटको रकममा पनि कर असूल गर्नु पर्दछ ?
कर लाग्ने मूल्यमा कुन कुन रकमहरु समावेश गर्नुपर्दछ ?
कर लाग्ने मूल्यमा देहायका रकमहरु समावेश गर्नुपर्दछ ।
उत्पादन वा खरिद लागत ।
कारोवारको सिलसिलामा विके्रताले व्यहोरेको ढुवानी र वितरण सम्बन्धी खर्चहरु ।
नाफाको रकम ।
मू.अ.कर बाहेक अन्तःशुल्क, स्वामित्व शुल्क र अन्य कर रकम ।
बेदर्तावालबाट खरिद गरेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरु बिक्री गर्दा कुन मूल्यमा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
बेदर्तावालबाट खरिद गरेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरुको कर निर्धारण त्यस्ता वस्तुहरुको विक्री मूल्य र खरीद मूल्य बीचको बचतमा मात्र कर असूल गर्नु पर्दछ । उदाहरणका लागि पुरानो मोटरसाईकल बेच्ने रिकन्डिशन हाउसले रु.५० हजारमा खरिद गरेको मोटरसाईकल रु.७० हजारमा बिक्री गर्दछ भने विक्री मूल्य र खरीद मूल्य बीचको बचत (रु.७०हजार - रु.५०हजार) अर्थात रु. २० हजारमा कर असूल गर्नु पर्दछ ।
आफूले खरिद गरी कर कट्टी दावी गरिसकेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरु बिक्री गर्दा कुन मूल्यमा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
आफूले खरिद गरी कर कट्टी दावी गरिसकेको प्रयोग भैसकेका वस्तुहरु बिक्री गर्दा विक्री मूल्यमा नै कर असूल गर्नु पर्दछ ।
व्यवसायिक प्रयोगमा रहेका सम्पत्तिहरु बिक्री गर्दा कर असूल गर्नु पर्दछ ?
व्यवसायिक प्रयोगमा रहेका सम्पत्तिहरु जस्तैः मेसिनरी, सवारीसाधन, उपकरण वा यन्त्र र यस्तै प्रकृतिका सम्पत्तिहरु विक्री गर्दा कर असूल गर्नपर्दछ।
व्यवसायिक प्रयोजनको लागि खरिद गरेको वस्तु आफैंले उपभोग गर्दा कर असूल गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ?
व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खरिद भई कर कटृी मिलान गरिसकेका पूंजीगत एवं उपभोग्य अन्य सामानलाई घरेलु वा वैयक्तिक प्रयोजनमा उपयोग गर्दा कर असुल गर्नु पर्दछ ।
कुनै मूल्य नलिई सित्तैमा कसैलाई दिएको वस्तु तथा सेवामा कर लाग्छ कि लाग्दैन ?
लाग्छ । यस्ता वस्तु तथा सेवाको कारोवार मूल्यको गणना वास्तविक बजार मूल्यको आधारमा गर्नुपर्दछ।
वस्तु विक्री गर्दा उपभोक्ताले कर तिर्न मानेन वा बुझाएन भने पनि कर संकलन गरेको सरह व्यवहार गर्नु पर्दछ ?
वस्तु वा सेवा प्रदान भईसकेपछि दर्तावाल व्यक्तिले कर असूल नगरेपनि वा खरीदकर्ताले कर वापतको रकम भूक्तानी नगरेतापनि कर दायित्व सिर्जना हुने हुँदा कर संकलन गरेको सरह व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
नेपाल भित्र उत्पादन भएको वस्तुहरु निकासीको प्रकृया पूरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कारणले पुनः पैठारी गर्नु परेमा के गर्नु पर्दछ ?
नेपाल भित्र उत्पादन भएको वा तयार भएको मालवस्तुहरु भन्सार कार्यालयबाट निकासीको प्रकृया पूरा भइसकेपछि वा विदेशमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीले लिन अस्वीकार गरी वा अन्य कारणले पुनः पैठारी हुन गई सोही मालवस्तु पैठारी भएको ३ महिना भित्र निकासी गर्ने भएमा यसरी फिर्ता ल्याउँदाको बखत लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर भंसारले धरौटीमा राखी छाड्न सक्दछ र त्यस्तो मालवस्तु पुनः निकासी भएपछि उक्त धरौटी फिर्ता दिनुपर्दछ ।
मैले आफ्नो जमीनमा लगाएको सालको बोट (काठ) बिक्री गर्दा कर असूल गर्नु पर्छ की पर्दैन ?
निजी आवादी वा सामुदायिक वनको काठ व्यापारिक प्रयोजनको लागि बिक्री गरेमा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि राष्ट्रिय वनको काठ सरह नै कर लाग्छ ।
मू.अ.कर प्रयोजनको लागि करदाता भन्नाले के बुझिन्छ ?
करदाता भन्नाले मू.अ.कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकाय दुवैलाई बुझाउँदछ । त्यस्तै व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकाय दुवैलाई बुझाउँदछ ।
व्यक्ति भन्नाले के बुझाउँदछ ?
व्यक्ति भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनि, संघ, संस्था, साझेदारी संस्था, सहकारी, संयुक्त व्यवसाय, गुठी वा कोषलाई बुझाउँदछ । सो शब्दले नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई कर लाग्ने कारोबारमा संलग्न रहेको सरकारी निकाय, धार्मिक संगठन, पारोपकारी संस्था वा त्यस्तै अन्य निकाय र तिनका शाखा वा उपशाखालाई समेत जनाउदँछ ।
मू.अ.कर प्रयोजनको लागि करदाता हुन मूख्य रुपमा के आधार लिइन्छ ?
मू.अ.कर प्रयोजनका लागि करदाता हुनको लागि मूख्य गरी दुई वटा आधार महत्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो कारोबार गर्ने वस्तु वा सेवाको प्रकृति र दोस्रो कारोबार रकम । तसर्थ मू.अ.करमा कारोवारको प्रकृति करयोग्य हो ? होइन ? र त्यस्तो कारोवारको सिमा वा कारोबार रकम महत्वपूर्ण हुने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले उक्त कारोबारबाट मूनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने जे सुकै उद्देश्य राखे पनि फरक पर्दैन । मू.अ.कर ऐनले करछुट हुने वस्तु वा सेवा भनी किटान गरेको वस्तु वा सेवा वाहेक अन्य सवै वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले कुनै निश्चित अवधीमा कानूनले निर्धारण गरेको कारोबार रकम (थ्रेसहोल्ड) भन्दा वढीको कारोबार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरु करदाता हुन र त्यस्ता व्यक्तिहरु मू.अ.कर प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ ।
एउटै वस्तु एकै दिनमा विभिन्न क्रेताहरुलाई भिन्न भिन्न मूल्यमा विक्री गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
मिल्छ, असम्बन्धित व्यक्तिहरुसितको स्वतन्त्र कारोबार मूल्य (Arm’s Length Price) का आधारमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्नुपर्दछ । तर न्यून विजिकरण भने हुनु हुंदैन ।
कर विवरण भनेको के हो ?
दर्ता भएका करदाताले आफ्नो कारोवारको खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी विवरण प्रत्येक कर
अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र आफू दर्ता भएको कार्यालय (ठूला करदाता कार्यालय,
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय)
मा पेश गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने ऐनको अनुसूची १० को ढाँचाको विवरण हो ।
के प्रत्येक महिना विवरण बुझाउनु पर्छ ?
तपाईंले आफ्नो दर्ता किसिम (अनिवार्य वा स्वैच्छिक) अनुसार मासिक, द्विमासिक वा चौमासिक रुपमा विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
विवरण कहिले बुझाउनु पर्दछ ?
कर अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र सम्वन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यायमा पेश गर्नु पर्दछ ।
क कसले कुन कुन अवधिमा विवरण बुझाउन पाउंछ ?
मासिक रुपमा कर विवरण वुझाउने गरी दर्ता भएका करदाताले कर अवधी समाप्त भएको
२५ दिन भित्र कर विवरण बुझाउनु पर्दछ । ईटा उद्योग, छापा, छापा तथा विद्युतीय
प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पर्यटन, चलचित्र घर तथा ढुवानी व्यवसायीले चाहेमा
चौमासिक रुपमा कर विवरण पेश गर्न सक्नेछ ।
चौमासिक कर अवधी भएका करदाताले कर विवरण कहिले कहिले बुझाउनु पर्छ ?
 साउन देखि कार्तिक सम्मको मंसिर २५ गते भित्र ।
 मंसिर देखि फागुनसम्म को चैत्र २५ गते भित्र ।
 चैत्र देखि आषाढसम्मको साउन २५ गते भित्र ।
क कसले दुई दुई महिनामा विवरण बुझाउन पाउछ ?
होटल तथा पर्यटन ब्यवसायीले मात्र ।
द्वैमासिक विवरण बुझाउने सुविधा पाएको व्यक्तिले कर विवरण कहिले बुझाउनु पर्दछ ?
साउन र भाद्रकोः आश्विन २५ गते भित्र ।
आश्विन र कार्तिककोः मंसिर २५ गते भित्र ।
मंसिर र पौषकोः माघ २५ गते भित्र ।
माघ र फाल्गुणकोः चैत्र २५ गते भित्र ।
चैत्र र वैशाखकोः जेष्ठ २५ गते भित्र ।
जेष्ठ र आषाढकोः साउन २५ गते भित्र ।
विवरण वुझाउन आ.रा.का.मा आउनु पर्दछ ? कहाँ बुझाउन सकिन्छ ?
कर विवरण कर अवधि समाप्त भएको २५ दिन भित्र कर अधिकृत समक्ष अर्थात आफु दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा बुझाउनु पर्दछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय नभएको जिल्लाका करदाताले १५ गते भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्न सक्छन । विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट समेत विवरण बुझाउन सकिन्छ ।
विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट विवरण भर्ने प्रक्रिया के हो ?
कुन अवधिको विवरण बुझाउन लागेको हो (कर अवधि) र सो कर अवधिभन्दा पहिलो
विवरण वुझाई Verify भएको अवस्थामा मात्र आफूले बुझाउन चाहेको अवधिको विवरण
बुझाउन सकिन्छ ।
 Mozilla Firefox वेव व्राउजर प्रयोग गरी www.ird.gov.np पेजलोड गर्नुहोस ।
 होमपेजमा भएको Taxpayer Portal क्लिक गर्नुहोस ।
 तत् पश्चात प्राप्त हुने Screen मा VAT Folder लाई छनौट गर्नुहोस ।
 तत् पश्चात VAT Return Entry मेनुमा क्लिक गर्नुहोस ।
 Submission Number प्राप्त गर्ने आवश्यकता अनुसारको बक्समा Username,
Password, PAN, Email Address, Contact Number टाइप गरी Register
Button मा क्लिक गर्नुहोस ।
 Submission No प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसारको वर्ष जस्तै २०७८, अवधि मासिक
भएमा महिना र चौमासिक भएमा प्रथम, दोश्रो वा तेश्रो छनौट गरी, सोही अवधिमा
भएको कारोवारहरु खरिद, बिक्री, मु.अ.कर रकम लगायतका सम्पूर्ण विवरणहरु प्रविष्टि
गरी विवरणलाई Save गर्न Save वटन मा क्लिक गर्नुहोस ।
 यसरी Save भएको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा VAT Folder मा भएको VAT
Return Login मेनुमा क्लिक गरी Submission Number तथा Submission
Number लिदा प्रयोग गरेको Username र Password टाइप गरी Login गरेर
विवरणलाई पूर्ण बनाउनुहोस् ।
 आफूले प्रविष्टी (Entry) गरेका विवरणहरु सबै रुजु गरी ठीक भएमा फारमको अन्तमा
भएको उदघोषलाई क्लिक गरी आफुले पेश गरेको विवरण सत्य तथा पुरा भएको
घोषणा गरी Submit वटन क्लिक गरी विवरण Submit भएको जानकारी प्राप्त
 यसरी विवरण Submit भै सकेपछि त्यस पेजमा भएको Save र Submit वटन
Disable भै Print वटन र Verify वटन मात्र Enable हुन्छ ।
 अब Print वटन मा क्लिक गरी विवरणहरु प्रिन्ट गरेर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व
कार्यालय वा कर दाता सेवा कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा गएर विवरण
Verify गर्नुहोस वा आफैले Verify गर्ने Username /Password प्राप्त गर्नु भएको
छ भने आफै Verify गर्नुहोस् ।
 तपाईले पेश गर्न चाहनु भएको विवरण Verify नभएसम्म विवरण पेश भएको मान्य
हुदैन । अतः आफुले पेश गरेको विवरण तोकिएको समयमा नै सम्बन्धित कार्यालयमा
गएर Verify गराउनुहोस् वा आफैले Verify गर्ने Username /Password प्राप्त गर्नु
भएको छ भने आफै Verify गर्नुहोस् ।
विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट विवरण बुझाउने (Self Verification) प्रक्रिया के हो ?
करदाताले आफुले पेश गरेको विवरण आफैले Verify गर्न सक्ने कर नीति अनुसार तपाईले आफै विवरण Verify गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा गएर विवरण Self-Verify को Username तथा Password लिनुहोस् ।
यदि तपाईको Self-Verify गर्ने Username तथा Password एउटै भएको खण्डमा विवरण भेरीफाइ हुदैन । तसर्थ विवरण भेरीफाई गर्नुपूर्व Taxpayer Portal को General भित्र गई Change Password मेनु खोली आफ्नो Password परिवर्नत गर्नुहोस् ।
अब General मा भएको Taxpayer Login मेनुमा क्लिक गरी Username तथा Password टाइप गरी Login गर्नुहोस र VAT, Income Tax को Module छनौट गरी आफूले पेश गरेको विवरणको Submission Number छनौट गर्नुहोस् ।
आवश्यकता अनुसारको Previous Vat Due Amount टाइप गरी विवरण Verify गर्नुहोस ।
यस Taxpayer Login मेनु बाट करदाताले आफुले पेश गरेका आयकर तथा मु.अ.करका विवरणहरु अबलोकन तथा प्रिन्ट गर्न सक्नु हुनेछ । करदाताले पेश गरेको सम्पूर्ण विवरणहरु यसै पेजबाट हेर्न र आवश्यकता अनुसारको विवरणहरु Verify समेत गर्न सकिन्छ । मू.अ.करको ATR हेर्नका साथै तिर्नुपर्ने कर e-Payment को माध्यमबाट तिर्न वा भौचर तयार गर्न समेत सकिन्छ ।
विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट विवरण बुझाउँदा के प्रत्येक महिना Auto verification का लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालमा User Name र Password लिनुपर्दछ ?
आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट एक पटक User name र password दर्ता गराए पुग्छ, पटक पटक User name र password लिनुपर्दैन । सुरक्षाको लागि समय समयमा आफैले Password बदल्नु पर्दछ ।
विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट विवरण बुझाउँदा के प्रत्येक महिना User name र password माँग गर्नुपर्दछ ?
हरेक पटक Submission Number लिँदा आफैले User Name तथा Password इन्ट्री गर्नु पर्दछ । एक पटक लिएको User name र password नै सँधै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
विवरण व्यवसायी स्वयंले बुझाउनु पर्छ कि अन्य कोहीले बुझाइ दिए पनि हुन्छ ?
सामान्यतया करदाता स्वयंले विवरण बुझाउनु पर्दछ, तर अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिले समेत बुझाउन सक्दछ ।
विवरण नबुझाएमा वा ढिलो बुझाए वापत कति जरिवाना लाग्दछ ?
विवरण अनुसार लाग्ने करको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा रु.१००० (जुन बढी हुन्छ) प्रति कर अवधि जरिवाना लाग्दछ ।
म एउटा ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) हुँ, मेरो कारोवार सधै हुँदैन, के मैले कारोवार भएको बखत मात्र विवरण बुझाउन मिल्छ ?
मिल्दैन । कारोवार भए पनि नभए पनि तपाईंले आफ्नो कारोवारको कर अवधि पूरा भएपछि विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
म असार मसान्तको दिन दर्ता भएको हुँ, के मैले असार महिनाको कर विवरण बुझाउनु पर्दछ ?
पर्छ । एक दिनको भएपनि एक कर अवधि गणना हुने हुँदा विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
मेरो विभिन्न स्थानमा शाखाहरु छन्, के मैले प्रत्येक शाखाको छुट्टाछुट्टै विवरण छुट्टाछुट्टै आ.रा.का.मा बुझाउनु पर्दछ ?
पर्दैन । प्रत्येक शाखाको विवरण जोडी आफू दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा कर विवरण बुझाउनु पर्दछ ।
विवरण बुझाउँदा केही अंक खरिद/विक्री खाता भन्दा फरक पारेर बुझाइएछ, अब मैले के गर्ने ?
तत्काल अर्को कर अवधिको विवरणमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तपाईंले आफ्नो व्यहोरा जनाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा कार्यालयले आंशिक कर परिक्षण गरी तपाईको विवरणा सच्याईदिन सक्दछ ।
e- filing गर्दा मेरो वास्तविक कारोवार अंक भन्दा फरक अंक प्रविष्ट भएछ, मैले सो सच्याउन के गर्नु पर्दछ ?
तत्काल अर्को कर अवधिको विवरणमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ । साथै तपाईंले आफ्नो व्यहोरा जनाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय । करदाता सेवा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु भएमा कार्यालयले आंशिक कर परिक्षण गरी तपाईको विवरणा सच्याईदिन सक्दछ ।
मैले दर्ता खारेजीका लागि निवेदन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गराइ सकेको छु, तर कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी दिएको छैन, के मैले विवरण बुझाइ रहनु पर्छ ?
तपाईंले दर्ता खारेजीको अवस्थामा भर्नुपर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) भरी बुझाइ आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटर प्रणाली -ITS_ बाट रजु -verify_ गराई सक्नु भएको छ भने विवरण बुझाइ रहनु पर्दैन । तर दार्ता खारेजीको लागि कार्यालयले दर्ता खारेज गरी निस्सा दिनु पर्दछ । त्यस्तो निस्सा वा जानकारी दिएको छैन भने कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला ।
करदाताको मृत्यु भएमा वा करदाता कानूनी व्यक्ति भई विघटन भएमा सो करदाताको विवरण कसले बुझाउनु पर्दछ ?
कानूनी ब्यक्ति खारेज वा विघटन भएमा लिक्विडेटरले ।
मृत्यु भएमा हकवाला वा संरक्षकले ।
कर अधिकृतले कर निर्धारण गरेको सूचना मलाई नबुझाई मेरो व्यावसायिक ठेगानामा हुलाक मार्फत पठाईएको रहेछ,सो मैले ढिलो प्राप्त गरेको कारणले सो आदेशमा उल्लेखित म्यादभित्र जवाफ दिन सकिन र एकतर्फी रुपम
नियमावलीको नियम ३१ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर
अधिकृतले करदातालाई नियम २९ बमोजिम कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा त्यस्तो
करदाताको ठेगानामा राखिएको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय उपकरण
मार्फत पठाएमा वा त्यस्तो आदेश निज वा निजको कार्यालयमा बुझाएमा वा निजको
ठेगानामा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत पठाएमा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ भनी
उल्लेख भएकोले सो आदेशले कानूनी मान्यता पाउँछ ।
म आफ्नो कारोबारको आफू सँग भएको लेखा कार्यालयमा रहेको लेखा सँग भिडान भएको छ, छैन हेर्न चाहन्छु, मैले के गर्नु पर्दछ ?
तपाईले कार्यालयमा गई निवेदन दिई Audit Trial Report माँग गर्नु भई सो सँग भिडान
गर्नुपर्दछ । आफु संग User Name तथा Password छ भने Audit Trial Report आफुले हेर्न
के कर अधिकृतले जुनसुकै बखत कर निर्धारण गरी कर दायित्व सिर्जना गर्न सक्दछ ?
होइन । देहायका कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछ :-
 म्यादभित्र कर विवरण पेश नगरेमा,
 अधुरो वा त्रुटीपूर्ण कर विवरण पेश गरेमा,
 झुठ्ठा कर विवरण पेश गरेमा,
 करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने
कारण भएमा ।
 आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नु पर्ने
 न्यून विजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा ।
 दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोवार गरेमा,
 बिजक जारी नगरी विक्री गरेमा,
 दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
 ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजिम कर दाखिला नगरेमा,
 दफा १७ को उपदफा (४) को अवस्था विद्यमान रहेमा ।
तर आर्थिक विधेयक (प्रतिस्थापन), २०७८ ले गरेको प्रावधान अनुसार मूल्य अभिवृद्धि
कर ऐन,२०५२ को दफा २० को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
राजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकार प्राप्त अदालतबाट कर निर्धारण संशोधन
गरिएको वा निर्धारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म कर अधिकृतले त्यस्तो
कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन ।
VAT मा दर्ता भए नभएको, VAT लाग्ने वा कर छुटको वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाताको पहिचान गराउने प्लेट ।
उँचाई १० से.मी. र लम्बाई ३० से.मी. ।
करदाताको कारोवारस्थलमा सबैले स्पष्ट देख्ने ठाउँमा ।
ऐन तथा नियमावली बमोजिम करपाटी नराखेको खण्डमा वा तोकिएको ठाउमा करपाटी नराखेमा पटकै पिच्छे दुईहजार रुपैयां जरिवाना लाग्छ ।
दर्ता भएको ७ दिन भित्र कारोबार स्थलमा सवैले देख्न सक्ने गरी राख्नु पर्दछ ।
दर्ता र दर्ता खारेजी
के व्यावसायिक कारोवार गर्ने सबैले VAT मा दर्ता गर्नु पर्दछ ? क कसले पर्दछ ?
सबैले पर्दैन । थ्रेसहोल्डभन्दा बढीको कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्ने र कानूनले अनिवार्य दार्ता गर्नु पर्ने भनी तोकेका व्यक्तिले दर्ता गर्नु पर्दछ ।
Threshold भनेको के हो ?
निश्चित रकमसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले दर्ता गर्नु नपर्ने गरी कानूनले तोके बमोजिमको कारोबार अंक ।
Threshold हाल कति तोकिएको छ ?
हाल वार्षिक रु ५० लाख भन्दा बढी मू. अ. कर लाग्ने वस्तु तथा रु २० लाख भन्दा
बढिको करयोग्य सेवाको कारोवार गर्ने करदाता मू. अ. करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
Threshold को निर्धारण कसरी गरिन्छ ?
सामान्यतया खरिद वा बिक्री अंकका आधारमा गरिन्छ ।
अनिवार्य दर्ता भनेको के हो ?
कुनै करयोग्य कारोवारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले कारोवार शुरु हुनुभन्दा अगावै वा विगत १२ महिनामा तोकिए बमोजिमको थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी कारोवार भएको वा आगामी ३ महिनामा हुने अनुमानित कारोबारको आधारमा थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी कारोबार हुने भएमा त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ ।
विगत बाह्र महिनामा वस्तुको कारोबारको हकमा वार्षिक पचास लाख रुपैयां, वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा रु. बीस लाखभन्दा बढीको करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्ति, ... व्यवसायिक प्रयोजनको लागि एक पटकमा रु. दश हजार रुपैयांभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु वा सेवा पैठारी गरेमा अनिवार्य दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कुनै व्यक्तिले वार्षिक दश लाख रुपैयांभन्दा बढी रकमको कुनैं बैंकबाट व्यवसायिक ऋण प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्ति अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनु पर्दछ । साथै मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १०(२) (क), (ख) मा उल्लेखित व्यक्ति समेत अनिवार्य दर्ता हुनु पर्छ ।
साना व्यवसायीले VAT मा दर्ता हुनु पर्छ, पर्दैन ?
कुनै पनि व्यवसायीले कारोवार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर
लागेको वा कारोवार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोवार दर्ताको
लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
क–कसले VAT मा दर्ता गर्नु पर्दछ ?
Threshold भन्दा बढी मू. अ. कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाता मू. अ.
करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
के स्थायी लेखा नम्बर (PAN) का लागि दर्ता गर्दा VAT पनि दर्ता गर्नु पर्दछ ?
लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिन सक्ननेछ ।
VAT दर्ता प्रमाणपत्र कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्दा के के कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ?
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको लागि दरखास्त दिँदा दरखास्त साथ देहायका कागजातहरु संलग्न गरी
पेश गर्नु पर्दछ ।
(क) पासपोर्ट साइजको फोटो :
 प्रोप्राइटरसिप फर्मको हकमा प्रोप्राइटरको दुई प्रति फोटो,
 साझेदारी एवं संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा साझेदारहरुको दुई दुई प्रति
फोटो, प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वा अन्य निकायहरुको हकमा संचालक
समितिले निर्णय गरेको मुख्य व्यक्तिको फोटो २ प्रति ।
(ख) व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र :
 उद्योगको हकमा उद्योग विभाग वा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग वा विशेष प्रकृतिको
उद्योग व्यवसायको हकमा त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्ने अन्य निकायमा दर्ता भएको प्रमाण,
 कम्पनीको हकमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण,
 व्यापार व्यवसायको हकमा वाणिज्य विभाग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा दर्ता
भएको भए सो को प्रमाण,
 स्थानीय निकायमा दर्ता भएको भए सोको प्रमाण ।
(ग) शिक्षक, डाक्टर, वकिल, नर्स, लेखा परीक्षक जस्ता सेवा व्यवसायको हकमा अनुमति दिने
निकायले जारी गरेको प्रमाण पत्र ।
(घ) निर्माण तथा ठेक्का व्यवसायको हकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्थानीय
तहले जारी गरेको अनुमति प्रमाण पत्र ।
(ङ) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :
 प्रोप्राइटरसिप फर्म भए सम्बन्धित प्रोप्राइटरको
 प्रा.लि. भए सवै संचालकहरुको
 पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए संचालकको
 साझेदारी तथा संयुक्त उद्यम भए सम्बन्धित सवै साझेदारहरुको
 बिदेशी व्यक्ति भए पासपोर्टको प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दूतावासले जारी गरको
(च) कारोवास्थल पहिचान गर्न सकिने गरी बनाइएको नक्सा
(छ) घर वहाल सम्झौता वा जग्गा धनी पूर्जा (आफ्नो घरमा भए जग्गा धनी पुर्जा, अर्काको घरमा
भए घरधनीसंग गरेको घरवहाल सम्झौतापत्र)
(ज) कम्पनीको हकमा प्रवन्ध पत्र/नियमावली
(झ) कम्पनीको अधिकारनामा (Power of Attorney)
(ञ) संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को हकमा सम्बन्धित पक्षबीचको सम्झौता र साझेदारहरुको
स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) दर्ता गर्दा जुनसुकै कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिन्छ?
दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर संयुक्त उपक्रम खडा गरेकोमा त्यस्ता व्यक्तिहरु दर्ता रहेको कार्यालयमध्ये कुनै एक कार्यालयमा मात्र दर्ता हुन सक्दछ । जस्तैः क भन्ने व्यक्ति र ख भन्ने व्यक्ति क्रमशः आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान र विराटनगरमा दर्ता रहेछन् भने त्यस्ता व्यक्तिको JV दर्ता धरान वा विराटनगरमध्ये कुनै एक कार्यालयमा मात्र गर्न सकिन्छ अरु कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिंदैन ।
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) एक पटक दर्ता भएपछि कहिलेसम्म कायम रहन्छ?
जुन कामका लागि JV खडा गरिएको हो, सो कार्य समाप्त नभएसम्मका लागि र सो कामका लागि मात्र दर्ता कायम रहन्छ । त्यसपछि त्यस JV को दर्ता खारेजी गर्नु पर्दछ ।
एक पटक दर्ता भएको संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) ले जति पनि काम गर्न पाईन्छ?
पाउदैन । संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) खडा गर्दा जुन कामका लागि खडा गरिएको
हो, सो कार्य बाहेक अन्य कामका लागि छुट्टै JV खडा गरी दर्ता गर्नु पर्छ ।
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को दर्ता खारेजी कहिले गर्ने?
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) दर्ता गर्दा कुनै निश्चित काम र अवधिको लागि खडा गरी दर्ता गरेकोमा सम्झौतामा तोकिएको काम र अवधि समाप्त भएपछि दर्ता खारेज गराउनु पर्दछ ।
संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को बांकि कर दायित्वको सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेको छ?
आफू संलग्न रहेको संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) को बांकि कर दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि साझेदारहरु संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रुपमा जिम्मेवार हुने व्यवस्था रहेको छ ।
VAT मा दर्ता गर्न कति दस्तुर तिर्नु पर्छ ?
दस्तुर तिनु पर्दैन ।
VAT दर्ता गर्न व्यवसायको मुख्य व्यक्ति स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्दछ ?
स्वयं उपस्थित हुनु पर्छ ।
म कर छुट र कर लाग्ने दुवै कारोवार गर्छु, के मैले VAT मा दर्ता हुनु पर्दछ ?
कुनै पनि व्यवसायीले कारोवार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर लागेको वा कारोवार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोवार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिन सक्ननेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ ले अनिवार्य दर्ताको प्रावधान हटाएको छ ।
के सामाजिक संघ संस्था, NGO, INGO ले पनि VAT मा दर्ता गर्नु पर्दछ ?
म अर्को सहरमा कारोवारको शाखा स्थापना गर्न चाहन्छु ? के मैले छुट्टै VAT दर्ता गर्नु पर्दछ ?
पर्दैन । एउटै दर्ताको प्रमाणपत्रबाट जति पनि शाखा खोली कारोबार गर्न सकिन्छ ।
म अर्को सहरमा कारोवारको शाखा स्थापना गर्न चाहन्छु ? मैले के गर्नु पर्दछ ?
जुन स्थानमा शाखा कायम गरी कारोबार गर्ने हो सोही स्थानको स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी शाखा कायम गरी, आफूँ दर्ता रहेको मूल आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिई, कारोवारको शाखा रहेको स्थानको वहाल संझौता समेत राखी शाखा कायम गर्न सकिन्छ ।
म अहिलेकै फर्मबाट थप कारोवार गर्न चाहन्छु ? के मैले अर्को VAT दर्ता नं. लिनु पर्दछ ?
पर्दैन । तपाईंले कारोबार दर्ता गरेको निकायबाट कारोबार थपेको कागजातका आधारमा निवेदन दिई पहिलेकै दर्ता नं. प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
म एक हप्ताका लागि मेला आयोजना गर्न चाहन्छु ? के मैले VAT दर्ता हुनुपर्छ ?
(१) अस्थायी रुपमा आयोजना गर्ने प्रदर्शनी, मेला तथा यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएकाले ऐनको दफा १०क. बमोजिम कारोबार दर्ता गर्न सम्बन्धित आयोजकको सिफारिस सहित सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका कर अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरी निवेदकलाई दर्ता नम्बर सहितको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिम निवेदकले राखेको धरौटी उपनियम (४) बमोजिम बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा मिलान गर्न पाउनेछ ।
VAT दर्ताको लागि आवेदन कहिले दिनुपर्छ ?
कुनै पनि व्यवसायीले कारोवार गरेको वस्तु वा सेवामा कर लाग्ने भएमा त्यसरी कर लागेको वा कारोवार सञ्चालन गरेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो कारोवार दर्ताको लागि तोकिएको ढाँचामा कर अधिकृतसमक्ष दरखास्त दिन सक्ननेछ । दर्ता विवरणमा केही परिवर्तन भए १५ दिन भित्र कर अधिकृत समक्ष जानाकारी गराउनु पर्छ ।
म VAT मा दर्ता भई कारोबार गरिरहेको छु, मेरो छोराको नाममा सानो कारोबार गर्न अर्को फर्म दर्ता गरी PAN मात्र लिई सोही पसलबाट कारोबार गर्न चाहन्छु, यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
मिल्दैन । छोराको कारोबार स्वतन्त्र हैसियत (यस अवस्थामा अर्को छुट्टै ठाँउमा) हुने भएमा मात्र मिल्छ ।
सरकारी कार्यालयसँग कारोबार गर्न VAT दर्ता गर्नु पर्दछ ?
सरकारी कार्यालयले रु.२० हजारभन्दा बढीको खरिद गर्दा वा वार्षिक पाँच लाख रुपैयांभन्दा बढीको ठेक्कापटृा दिंदा वा परामर्श सेवा लिंदा दर्ता भएको व्यक्तिसंग मात्र दिनु लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो अनुसार कारोबार गर्न दर्ता गर्नु पर्दछ ।
कति रकम भन्दा बढीको आयात/पैठारी गर्न VAT दर्ता गर्नु पर्दछ ?
एक पटकमा रु.१०,००० भन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्दा VAT दर्ता गर्नु पर्दछ ।
स्वेच्छिक दर्ता भनेको के हो ?
थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कर (VAT) लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गर्ने व्यक्तिले पनि स्वेच्छाले दर्ता गर्ने प्रक्रिया ।
स्वेच्छिक दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
सरकारी कार्यालयसँग कारोबार गर्न पाईन्छ ।
दर्तावाल करदाताले कर बीजक खोज्ने हुँदा दर्तावालसँग कारोबार विस्तार हुन्छ ।
आफूले खरिद गर्दा तिरेको कर (VAT) कट्टी दाबी गर्न मिल्छ ।
अवस्थामा VAT को दर्ता खारेज गर्न पाइन्छ ?
दर्ता खारेजी गर्न सक्ने अवस्थाहरु देहाय वमोजिम छन :-
संगठित संस्था भए त्यस्तो संगठित संस्था वन्द, विक्री वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै किसिमबाट त्यस्तो संगठित संस्थाको अस्तित्व कायम नरहेमा ।
व्यक्तिगत स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा,
साझेदारी संस्था भए त्यस्तो साझेदारी संस्था विघटन भएमा वा साझेदारको मुत्यू भएमा,
दर्ता भएका व्यक्तिले कर लाग्ने कारोबार गर्न छाडेमा,
लगातार बाह्र महिनासम्म शून्य विवरण दिने वा विवरण नै नदिई बसेका करदाता भएमा,
विगत बाह्र महिनामा थ्रेसोल्डभन्दा घटिको कारोबार भएमा ,
भूलवश दर्ता भएकोमा ।
दर्ता खारेज गर्न के के कागज चाहिन्छ ?
दर्ता खारेजीको दरखास्त र व्यापार बन्द अवस्थामा भर्नु पर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) । दरखास्त दिइ सकेपछि कर परिक्षणका लागि आवश्यक कागजातहरु ।
मू.अ. कर ऐन, २०५२ र नियमावली, २०५३ मा दर्ता खारेजीको प्रकृया के छ ?
सामान्य अवस्थामा दर्ता खारेजीको प्रकृयाः–
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० बमाजिम स्थायी रुपमा दर्ता भएका करदाताको दर्ता खारेज गर्नु पर्ने भएमा त्यस्ता करदाताको दर्ता खारेजी गर्ने प्रकृया ऐन र नियमावलीमा व्यबस्थित गरिएको छ । दर्ता खारेजीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) मा निम्न व्यवस्था गरेको छः
दफा ११(३): दर्ता खारेजीको लागि कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र करदाताले कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नु पर्नेछ र कर अधिकृतले त्यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी तीन महिनाभित्र दर्ता खारेज गरी वा दर्ता खारेज नहुने भए त्यसको जानकारी करदातालाई दिनु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र कर अधिकृतले दर्ता खारेज नगरेमा वा दर्ता खारेज हुने भनी निर्णय नगरेमा त्यस्तो अवधिपछिको कर विवरण करदाताले पेश गर्नु पर्ने छैन ।
त्यस्तै नियमावलीको नियम १२ मा दर्ता खारेजी प्रकृयाका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छः
नियम १२. दर्ता खारेजी प्रक्रियाः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्थाको कारणबाट कुनै दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज हुने भएमा त्यस्तो दर्ता भएको व्यक्ति वा निज नरहेको अवस्थामा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि दर्ता खारेज हुने अवस्था खुलाई अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण तथा बुझाउनु पर्ने कर रकम समेत संलग्न राखी सम्बन्धित कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिएमा वा दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था विद्यमान रही दर्ता भएको व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्नु पर्ने कुरामा सम्बन्धित कर अधिकृत विश्वस्त भएमा बाँकी कर रकम बुझाउन लगाई त्यस्तो व्यक्तिको दर्ता खारेज गरी सो कुराको जानकारी सम्बन्धित दर्ता भएको व्यक्ति वा निजको हकवाला र विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा ३ महिनासम्म कर विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनु सम्बन्धित कर अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ ।
ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा दर्ता खारेज हुने करदाताले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः
(क) दर्ता खारेज हुने करदाता वा निजको हकवालाले दर्ता खारेज हुने अवस्था सिर्जना भएको मितिले तीस दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची–११ बमोजिको कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ ।
(ख) अनुशूची–११ बमोजिमको कर विवरण बुझाएको करदाताले सो विवरण देहाय बमोजिम पेश गर्नु पर्दछ ।
१. मौज्दातमा रहेका करयोग्य बस्तुको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,
२. पहिले पूँजीगत वस्तुमा क्रेडिट दावी गरेको भए सो वस्तु हालको बजार मूल्यको १३ प्रतिशतले हुने रकम सो विवरणको अन्य थपघटको डेविटतर्फ समावेश गर्ने,
३. अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण र सो भन्दा अगाडिका कर विवरण वा कर निर्धारण बमोजिम बुझाउन बाँकी कुनै कर रकम भए सो रकम दाखिला गर्नु पर्दछ ।
(ग) अनुसूची–११ बमोजिमको कर विवरण पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र कर परीक्षणको लागि कागजात पेश गर्नु पर्दछ ।
(घ) दर्ता खारेजीको लागि दरखास्त दिएपछि दर्ता खारेजीको जानकारी नभएसम्म वा तीन महिनासम्म कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ ।
(ङ) दर्ता खारेजी परिक्षणबाट कुनै कर निर्धारण भएका सो रकम दाखिला गर्ने ।
ऐन र नियमावलीका उपरोक्त व्यवस्थाहरु अनुसार दर्ता खारेजीका सन्दर्भमा सम्बन्धित कार्यालयको कर अधिकृतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछः
(क) दर्ता खारेज हुने करदाताले कर परीक्षणको लागि पेश गरेको कागजात परीक्षण गरी सो करदाताको कर दायित्व यकिन गर्नु पर्दछ ।
(ख) दर्ता खारेज हुने करदातालाई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाउन लगाउन पर्दछ ।
(ग) करदाताले बाँकी कर रकम बुझाए पछि सो करदाताको दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ ।
(घ) दर्ता खारेजीको जानकारी सम्बन्धित करदातालाई गराउनु पर्दछ ।
(ङ) दर्ता खारेजीको दरखास्त परेको मितिले ३ महिनाभित्र दर्ता खारेज भएको वा नहुने भए सो विषयको जानकारी दिनु पर्दछ ।
म स्वेच्छाले VAT दर्ता भएको हुँ र सानो व्यवसाय भएकोमा के म स्वेच्छाले नै दर्ता खारेज गर्न पाउँछु ?
स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गराएको सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले कारोबार दर्ता गराएको मितिले एकवर्ष पुरा नभएसम्म स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता खारेजी गर्न पाउँदैन । दर्ता भएको एक वर्षपछि निवेदन दिई दर्ता खारेजी गराउन सक्नेछ ।
म आफ्नो व्यवसाय छोडी अवकाश प्राप्त जीवन विताउन कारोवार छोरालाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु, के मैले मेरा दर्ता नम्बर मेरो छोरालाई दिन मिल्छ ? मैले के गर्नु पर्दछ ?
तपाइको व्यवसाय एकलौटी हो भने आफ्नो दर्ता नम्बर छोरालाई दिन मिल्दैन, तपाईंले छोरालाई कारोबार हस्तान्तरण गरी आफ्नो दर्ता खारेज गर्नु पर्दछ । छोराले नयाँ नम्बर लिई कारोबार गर्नु पर्दछ ।
म आफ्नो कारोबार अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गर्न चाहन्छु, के मैले मेरा दर्ता नम्बर सो व्यक्तिलाई दिन मिल्छ ? मैले के गर्नु पर्दछ ?
तपाइको व्यवसाय एकलौटी हो भने आफ्नो दर्ता नम्बर अर्को व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन, तपाईंले अर्को व्यक्तिलाई कारोबार बिक्री गरी आफ्नो दर्ता खारेज गर्नुपर्दछ । अर्को व्यक्तिले नयाँ नम्बर लिई कारोबार गर्नु पर्दछ । कुनै कारोबार वा व्यवसाय बिक्री वा बन्द भएमा त्यसरी बन्द वा बिक्रीको अवस्थामा मौज्दातमा रहेको वस्तु पूंजिगत सामान समेत बजार मूल्यमा बिक्री भएको मानी प्रचलित दर अनुसार लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
एक, डेढ वर्षदेखि कारोबार नभएकोले मैले शून्य विवरण बुझाउदैं आएको छु, के मैले दर्ता खारेज गर्न पाउँछु ?
पाउनुहुन्छ । लगातार एक वर्षे शून्य विवरण बुझाउदैं आएका करदाताले दर्ता खारेज गर्नका लागि आवेदन दिन पाईन्छ ।
म आफ्नो कारोवार दर्ता खारेज गर्न चाहन्छु, मैले पहिले करकट्टी लिई सकेको सामानलाई के गर्नु पर्दछ ?
दर्ता खारेजीको अवस्थामा मौज्दातमा रहेका वस्तु बिक्री भएको मानी कर तिर्नु पर्छ ।
म अहिले एकलौटी व्यवसाय संचालन गरिरहेको छु, सो लाई कम्पनी (प्रा.लि.) मा परिणत गर्न चाहन्छु ? के मैले अहिलेकै दर्ता नम्बर प्रयोग गर्न मिल्छ ? मैले के गर्नु पर्दछ ?
मिल्दैन । तपाईंले एकलौटी व्यवसाय दर्ता नम्बर खारेजीको प्रक्रियामा लगी कम्पनी (प्रा.लि.) का लागि नयाँ दर्ता गर्नु पर्दछ ।
मैले दर्ता खारेजीका लागि निवेदन आ.रा.का. मा दर्ता गराइ दर्ता खारेजीको अवस्थामा भर्नुपर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) भरी बुझाइ सकेको छु,के मैले मेरो दर्ता खारेज भएको मान्न मिल्छ ?
कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी नदिएसम्म दर्ता खारेज भएको मान्न मिल्दैन । दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आफनो कारोवारको लेखा परीक्षणको लागि कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ।
मैले दर्ता खारेजीको लागि निवेदन दिई सकेको छु, तर कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी मलाई दिएको छैन ? यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ?
तपाईंले दर्ता खारेजीको अवस्थामा भर्नु पर्ने कर विवरण (अनुसूची –११) भरी बुझाइ सक्नु भएको छ भने विवरण बुझाइ रहनु पर्दैन । तर कार्यालयले दर्ता खारेज भएको जानकारी नदिएसम्म दर्ता खारेज भएको मान्न मिल्दैन ।
मैले VAT दर्ता खारेज गरि सकेको छु, अब फेरि म सोही व्यवसाय गर्न चाहन्छु, मैले के गर्नु पर्दछ ?
तपाईंले VAT मात्र दर्ता खारेज गर्नु भएको हो भने VAT दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । तर स्थायी लेखा नम्बर (PAN) पनि स्थगन गराउनु भएको छ भने पुरानो स्थायी लेखा नम्बर (PAN) राखी दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ ।
मैले आ.रा.का.विराटनगरबाट स्थायी लेखा नम्बर -PAN_ पनि स्थगन गराई VAT दर्ता खारेज गरि सकेको छु, अब फेरि म सोही व्यवसाय आ.रा.का.पोखराको कार्यक्षेत्रबाट गर्न चाहन्छु, अब मैले कहाँ सम्पर्क गर्नुपर
तपाईंले आ.रा.का.पोखरामा सम्पर्क गरी पुरानो स्थायी लेखा नम्बर (PAN) राखी दर्ताका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ ।
म हाल आ.रा.का.विराटनगरको करदाता हुँ । म आफ्नो कारोवार बिरगञ्ज सार्न चाहन्छु, मैले के गर्नुपर्दछ ?
तपाईंले कारोबार दर्ता गरेको निकायबाट कारोबारको स्थान परिवर्तन गराई आफू दर्ता रहेको कार्यालयमा निवेदन दिनु भएमा सो कार्यालयले बाँकी बक्यौता केही भए सो लिई फाइल सार्ने निर्णय गरी तपाईंको फाइल आ.रा.का. बिरगञ्ज पठाई सो को जानकारी विभागलाई दिनेछ ।
म मू.अ.करमा दर्ता हुनु पूर्व म सँग कर तिरी खरीद गरेको केही सामान मौज्दातमा छ, यस्तो सामानको कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ? मिल्छ भने कसरी गर्ने ?
मिल्छ । करदाताले आफू दर्ता हुंदाका बखत मौज्दातमा रहेका वस्तुमा लागेको कर कट्टी गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची – १६ बमोजिमको ढांचामा कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ । यसरी कर कट्टीको दावी गर्दा कर तिरेको बिजकहरु र अन्य प्रमाण कागजातहरु दर्ता भएको १५ दिनभित्र पेश गरी सक्नु पर्दछ । करदाताद्घारा गरिएको दावी उपर कर अधिकृतले छानविन गरी स्वीकृत भए पछि मात्र करदाताले कर कट्टीको सुबिधा पाउंदछ ।
दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै माध्यमबाट प्रदर्शन वा घोषणा गरेको करलाग्ने वस्तु वा सेवाको विक्री मूल्यमा मूल्य उल्लेख गर्दा कसरी गर्नु पर्दछ ?
यसमा दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, बिक्री कक्ष, होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, कारोबार स्थल वा आपूर्ति गर्ने स्थानमा राखिएको कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्री मूल्य (ट्याग प्राइस, मेनु प्राइस र सेल्स प्राइस) मा कर सहितको मूल्य उल्लेख गर्नु पर्दछ । यसरी कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री मूल्य घोषणा वा प्रदर्शन गरी सकेपछि छुट्टै मू.अ.कर जोडेर मूल्य कायम गर्न पाईदैन ।
निर्देशनात्मक दर्ता (Forced Registration) भनेको के हो ? यस सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको छ ?
दर्ता हुनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति दर्ता नभएमा कर प्रशासनले दर्ता गर्न आदेश दिन सक्दछ । यस किसिमको दर्ता व्यवस्थालाई निर्देशनात्मक दर्ता (Forced Registration) भनिन्छ । यस्तो आदेश करदाताको लागि वाध्यकारी हुन्छ । यसरी प्राप्त हुने आदेश बमोजिम दर्ता हुन नपर्ने अवस्था रहेको भए सो को प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको रहन्छ ।
दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कस्तो सजायँ हुन्छ ?
दर्ता हुनु पर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर बिगोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कुनै करदाताले कर छलेको विषयमा सूचना दिएमा सुराकीले पुरस्कार पाउने व्यवस्था छ ? छ भने कति पुरस्कार पाउँछ ? कहिले पाउँछ ? कहाँबाट पाउँछ ?
कुनै करदाताले आफ्नो करको दायित्वको सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असूलउपर गरिएको करको रकम मध्ये निजले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत वरावरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दिन सक्नेछ ।
कर छली सम्बन्धी सूचना दिई पुरस्कार पाउन मैले के के कागज पेश गर्नु पर्दछ ? के मैले आफ्नो नाम थाहा नदिई सांकेतिक चिन्ह प्रयोग गर्न सक्दछु ?
कर छलेको प्रमाणको सुचना र तपाईंको परिचय खुल्ने कागजात । तपाईको परिचय गोप्य रहनेछ ।
पुरस्कार पाउन निवेदन दिएको कति दिनभित्र कहाँबाट मैले पुरस्कार पाइसक्छु ?
महानिर्देशकको निर्णयले तपाईंले सूचना दिनु भएको सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ।
पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा वढी भएमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
यदि पुरस्कार पाउने व्यक्ति एक भन्दा वढी भएमा पुरस्कार वापतको २०% रकम समानुपातिक रुपमा वितरण गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
पूर्वादेश भनेको के हो ?
कुनै व्यक्तिले मू.अ.कर ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्धिविधा निराकरणका लागि विभागसमक्ष लिखित रुपमा निवेदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई विभागको धारणा लिखित रुपमा सूचित गर्ने विभागीय धारणा नै पूर्वादेश हो । मु.अ.कर ऐनको दफा ३२(क) मा पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
पूर्वादेश कहाँबाट पाइन्छ ?
आन्तरिक राजस्व विभागबाट ।
पूर्वादेश लिने प्रक्रिया के हो ?
पूर्वादेश माग गर्न विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । यस प्रयोजनका लागि निवेदनको ढाँचा तोकिएको छ । पूर्वादेश माग गर्न सम्बद्ध विषयको पूर्ण र यथार्थ विवरण विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
मैले जस्तै समस्या भोगेको अर्को करदाताले पाएको पूर्वादेश मेरो सम्बन्धमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ?
सकिदैन । पूर्वादेश जसको लागि जारी भएको हो त्यसैलाई मात्र लागु हुन्छ ।
के जुनसुकै विषयमा पनि पूर्वादेश प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधा सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निर्णय भई सकेको अवस्थामा बाहेक आफूलाई परेको द्धिविधा बारेमा पूर्वादेशका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ ।
के कुनै काल्पनिक विषयमा विभागको राय जान्न पूर्वादेश माग गर्न सकिन्छ ?
कुनै काल्पनिक विषयमा विभागको राय जान्न पूर्वादेश माग गर्न सकिदैन । पूर्वादेशको विषयवस्तु निवेदकको कारोबारको यथार्थ अवस्थासँग सम्बन्धित भै कानूनी द्विविधा परेको हुनुपर्छ ।
पूर्वादेश पाउन कुनै धरौटी वा दस्तुर बुझाउनु पर्दछ ?
पूर्वादेश माग गर्न कुनै धरौटी वा दस्तुर बुझाउनु पर्दैन ।
पूर्वादेश बाध्यकारी आदेश हो ? हो भने यो कसका लागि बाध्यकारी हो ?
पूर्वादेश माग गर्ने निवेदक र कार्यान्वयन गर्ने कर प्रशासनका लागि मात्र पूर्वादेश बहाल रहेसम्म उक्त आदेश बाध्यकारी हुन्छ, अन्यलाई बाध्यकारी हुँदैन । पूर्वादेशसंग सम्बद्ध विषयको पूर्ण यथार्थ विवरण विभाग समक्ष प्रस्तुत गरेको र पूर्वादेश माग गरिएको निवेदनमा उल्लिखित बुंदा अनुरुपको प्रबन्ध भएको व्यक्तिको हकमा आन्तरिक राजस्व विभाग यस्तो पूर्वादेश मान्न बाध्य छ । पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा सार्वजनिक परिपत्रभन्दा पूर्वादेशले यस्तो व्यक्तिका लागि प्राथमिकता पाउँछ ।
पूर्वादेशको पालना क-कसले गर्नु पर्दछ ?
कर प्रशासन र निवेदक दुवैले यो आदेशको पालना गर्नु पर्दछ ।
विभागले के कस्ता विषयहरुमा सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न सक्दछ ?
ऐनको कार्यान्वयनको सिलसिलामा एकरुपता ल्याई प्रशासनलाई सरल बनाउन, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयका अधिकृत लगायत यस ऐनबाट प्रभावित हुने व्यक्तिलाई मार्ग निर्देशन दिन विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाको सम्बन्धमा व्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरु विभागको वेवसाईट र राष्ट्रियस्तरको पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्न सक्दछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेको के हो ?
कर प्रशासन तथा करदाता बीचको द्वन्द्व तथा विवाद निरुपण गर्न र कर प्रशासनबाट हुने गरेका कार्यगत,गणितीय,प्राविधिक तथा कानूनी त्रुटिहरुलाई प्रशासनिक तवरबाट समाधान गर्न विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिने व्यवस्था नै प्रशासकीय पूनरावलोकन हो । कर प्रणालीको विवाद निरुपणको प्रथम प्रस्थान विन्दु नै प्रशासकीय पूनरावलोकन हो ।
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण प्रति मलाई चित्त बुझेन मैले के गर्ने ?
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र सो निर्णय बिरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । निवेदन दिने म्याद गुज्रिन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि म्याद गुज्रिएको मितिले सात दिन भित्र निवेदन दिएमा विभागले म्याद गुज्रेको मितिबाट बढीमा तीस दिनको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
के कस्तो अवस्थामा र के के कुराका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आवेदन गर्न पाईन्छ ?
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णयको बिरुद्ध मात्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।
कर परीक्षणको क्रममा/प्रारम्भिक कर निर्धारणबाट कर अधिकृतले म उपर अन्याय गर्न लागेको भन्ने मलाई लागेमा प्रशासकीय पुनरावलोकन बाहेक उपचारको बाटो अरु केही छ ?
ऐनको दफा ३०क मा कर निर्धारण भई नसक्दै सो कर निर्धारण सम्बन्धी कुनै कारबाही अनियमित हुन लागेको छ वा भएको छ भन्ने कुरा महानिर्देशकलाई प्राप्त सूचनाबाट देखिन आएमा स्पष्ट कारण खोली पर्चा खडा गरी महानिर्देशकले पुनः कर निर्धारण गर्न सम्बन्धित कर अधिकृतलाई निर्देशन दिन वा अन्य कुनै कर अधिकृतलाई सो काम गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो दफा अन्तर्गत महानिर्देशकबाट उपचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि कति दिन भित्र कहाँ निवेदन दिनु पर्दछ ?
कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय बिरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्नका लागि निवेदन दिदा करदाताले रकम दाखिला गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? कति रकम दाखिला गर्नुपर्छ ?
पर्छ । निर्धारित कर रकम मध्ये विवाद रहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकमको एक चौथाई रकम नगद दाखिला गर्नुपर्दछ । दाखिला गर्नुपर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाकी रकम मात्र दाखिला गर्नुपर्दछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्नका लागि आवेदन दिंदा धरौटी वापत बैँक जमानी राख्न मिल्छ मिल्दैन ?
मिल्दैन । नगद रकम नै दाखिला गर्नु पर्दछ । दाखिला गर्नुपर्ने रकम निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै बढी दाखिला गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामेसम्मको रकम कटाई बाकी रकमा मात्र दाखिला गर्नुपर्दछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट पनि मलाई चित्त नबुझेमा मैले के गर्ने ?
दफा ३२ बमोजिम विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पूनरावेदन दिन सक्नु हुनेछ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आवेदन प्रक्रिया के हो ? कागजात केके चाहिन्छ ?
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन सम्बन्धित आ. रा. का. मार्फत् वा सोझै आ.रा.वि.को
महानिर्देशकलाई दिन सकिन्छ । रु. १० को हुलाक टिकट, निर्णय पर्चाको प्रमाणित
प्रतिलिपि, सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण आदेश बुझेको भरपाईको प्रमाणित
प्रतिलिपि, कर निर्धारण आदेशको प्रतिलिपि, म्याद थप गरेको भए म्याद थप गरेको पत्रको
प्रतिलिपि, विवादित कर रकमको एक चौथाई रकम सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा दाखिला
गरेको भौचरको प्रतिलिपि, तिर्न मन्जुर गरेको रकम पुरै दाखिला गरेको भौचरको
प्रतिलिपि, सम्बन्धित व्यक्ति नभएको अवस्थामा फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले प्रदान
गरेको अख्तियारनामा र वारेशनामा, पुनरावलोकन हुनुपर्ने कारण तथा आधारहरु (जिकिर)
स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी दिएको निवेदनपत्र तथा निवेदनपत्रको थप एक प्रति प्रतिलिपि
सहित आवेदन गर्नुपर्दछ ।
ऐनले तोकेको म्याद (६० दिन) भित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट मैले उपचार पाइन भने मैले के गर्ने ?
म्यादभित्र विभागले निर्णय नदिएमा तपाईंले राजस्व न्यायाधिकरण ऐन,२०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पूनरावेदन दिन सक्नुहुनेछ ।
कस्तो अवस्थामा र के के कुराका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाईन्छ ?
ऐनको दफा ३० बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निलम्बनको आदेश वा दफा ३१क.बमोजिम विभागले प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा गरेको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।
राजस्व न्यायाधिकरण कहाँ कहाँ छन् ? कुन कुन क्षेत्रको करदाताले कहाँ पुनरावेदन गर्नुपर्दछ ?
राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं :- काठमाडौं उपत्यका भित्रका तथा हेटौंडा, भरतपुर, सीमरा, बिरगन्ज र जनकपुर आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर :- भद्रपुर, दमक, विराटनगर, धरान, इटहरी र लहान आ.रा.का. को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
राजस्व न्यायाधिकरण पोखरा :- पोखरा, भैरहवा, बुटवल, कावासोती, वागलुङ्ग, दमौली र कृष्णनगर आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगंज :- नेपालगन्ज, सुर्खेत, जुम्ला, दांग, धनगढी, महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा आ.रा.का.को कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका करदाताहरु ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? कति धरौटी राख्नुपर्छ ?
पर्छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिंदा निर्धारित कर रकम मध्ये विवादरहित कर रकम बुझाई विवादित कर रकम र जरिवानाको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्न वा त्यस्तो रकम वापत वैंक प्रत्याभूती दिनु पर्नेछ ।
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न धरौटी राख्दा बैँक जमानत राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगई सोझै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन जान मिल्छ कि मिल्दैन ?
VAT दर्ता भए पछि कुनकुन सूचना, कागजात तथा विवरणहरुको अभिलेख अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्दछ ?
दर्ता भएको व्यक्तिले देहायका सूचना, कागजात तथा विवरणहरुको अभिलेख राख्नु पर्नेछ :–
व्यापार लेखा नगद प्राप्ति र भुक्तानी सम्बन्धी अभिलेख ।
आफूले जारी गरेका कर बिजक तथा संक्षिप्त कर बिजकहरु ।
आफूले प्राप्त गरेका कर बिजक तथा संक्षिप्त कर बिजकहरु ।
आफूले गरेको आयात र निर्यातसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु ।
आफूले खरीद र बिक्री गरेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा घटबढ भएको प्रमाणित गर्ने कागजातहरु ।
सम्पूर्ण डेविट तथा क्रेडिट नोट र अन्य तत्सम्बन्धी कागजातहरु ।
अनुसूची–७ बमोजिमको मुल्य अभिवृद्धि कर लेखा तथा अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका खरीद बिक्री खाताहरु ।
खाता प्रमाणित गर्नु भनेको के हो ?
अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका परिवर्तित ढांचामा आ.व.
२०७८।०७९ देखि खरीद तथा बिक्री खाताहरु करदाता आफैले प्रमाणित गरी राख्ने काम
खाता कहिले कहिले प्रमाणित गर्नु पर्दछ ?
प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सिलसिलेवार नम्वरको खरिद र बिक्री खाता अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताको हकमा साउन महिना भित्र, द्वैमासिक कर विवरण बुझाउने करदाताको हकमा श्रावण र भाद्र महिना भित्र र चौमासिक कर विवरण बुझाउने सुविधा पाएका करदाताहरुले श्रावण महिनादेखि कार्तिक महिना भित्र मू.अ.कर खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्दछ ।
के कर अधिकृतबाट खाता प्रमाणित नगराई प्रयोग गर्नु हुन्छ ?
खाता प्रमाणित नगरी प्रयोग गरेमा के हुन्छ ?
ऐनको दफा २९(१) बमोजिम दश हजार रुपैया जरिवाना हुन्छ । साथै प्रमाणित नगरी राखिएका खाता आधिकारिक नहुने हुँदा छानविन तथा अनुशन्धान समेत हुन सक्छ ।
VAT प्रयोजनका लागि प्रमाणित गरिएको खाता कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ ?
६ वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ ।
आ.व. को सुरूमा प्रमाणित गरेको खाता आ.व. समाप्त नहुँदै सकियो, मैले के गर्ने ?
प्रमाणित गरेको खाता समाप्त हुनासाथ थप (नयाँ) खाता प्रमाणित गर्न निवेदन दिनु पर्दछ ।
गत वर्ष प्रमाणित गरेको खातामा यस आ.व. लाई पुग्ने जति पानाहरू बाँकी छन् के मैले खाता पुनः प्रमाणित गर्नुपर्दछ ?
म आफ्नो कारोवारको लेखा कम्प्युटरमा राख्न चाहन्छु, मैले के गर्नुपर्छ ?
तपाईंले प्रयोग गर्न चाहेको सफ्टवेयरको विस्तृत विवरण सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ । कार्यालयबाट स्वीकृती प्राप्त गरेर मात्र लेखा कम्प्युटरमा राख्न पाईन्छ । सफ्टवेयरमा ऐनले तोकेको ढाँचामा खरिद खाता,बिक्री खाता राख्ने र कर बीजक जारी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । एकपटक जारी भईसकेको बीजक मेट्न नमिल्ने हुनु पर्दछ । संशोधन गर्नु पर्ने भएमा डेबिट नोट वा क्रेडिट नोटका माध्यमले मात्र संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
कर अधिकृत निरीक्षणका लागि मेरो कारोवार स्थलमा आएको / कर परीक्षणका वखत खाता प्रमाणित गरी माग्न मिल्छ ?
खाता प्रमाणित गर्ने समयावधि भित्र मिल्छ ।
कस्तो कस्तो खरिदलाई खरिद खातामा प्रविष्ट गर्न हुन्छ ? कस्तोलाई हुदैंन ?
तलब, ज्याला जस्ता खरिद बील नहुने खर्च बाहेक बीजक प्राप्त हुने सबै प्रकारका खरिद सम्बन्धी भुक्तानीहरुलाई खरिद खातामा प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।
खरिद फिर्ता बिक्री फिर्तालाई कहाँ कसरी प्रविष्ट गर्ने ?
डेबिट नोट वा क्रेडिट नोट जारी गरी खरिद र बिक्री खातामा नै प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।
ढिलो गरी प्राप्त गत महिनाको प्रविष्ट गर्न बाकी खरिद,बिक्री बिजक कसरी प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ?
जुन महिनामा बीजक प्राप्त हुन्छ, सोही महिनामा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ । तर एक वर्ष भन्दा ढिला हुनु हुँदैन ।
खरिद, बिक्री बिजक खातामा कहिले प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ?
बिक्री विजक जारी गर्ने बित्तिकै र खरिद विजक प्राप्त हुने बित्तिकै ।
कर अधिकृतले निरिक्षण गरेको समयमा खरिद, बिक्री बिजक खातामा प्रविष्ट नगरेको पाइएमा के हुन्छ ?
ऐन बमोजिम कर अधिकृतले रु.१००००।- (दस हजार ) जरिवाना गर्न सक्दछ ।
कर अधिकृतले निरीक्षण गर्दा करदाताले कारोवारको लेखा निरीक्षण गर्न नदिएमा के हुन्छ ?
ऐन बमोजिम कर अधिकृतले पटकैपिच्छे रु. २०,०००।- (वीस हजार) जरिवाना हुन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) भनेको के हो ?
मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) वस्तु र सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरुमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको तहमा लाग्ने कर भएकाले नै यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि करको गणना कसरी गरिन्छ ?
उत्तरः करको दर १३ प्रतिशत
बिक्रीमा संकलन गरिने कर (Output tax) (ख)
खरिद र पैठारी मूल्य
खरिद र पैठारीमा तिरेको कर
मूल्य अभिवृद्धि कर (Output Tax – Input Tax)
उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने र सरकारले प्राप्त गर्ने मू.अ. कर
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कहिले देखि लागू भएको हो ?
वि.सं.२०५४ मंसिर १ गते ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर किन लगाइएको हो ?
करको दायरा वढाएर राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न ।
करको आधार विस्तार गरी करका दरहरु घटाउन ।
वस्तु र सेवामा लगाईएका विभिन्न करहरुलाई खारेज गरी मू.अ.करलाई राजस्वको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न ।
स्वयं कर निर्धारण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न ।
करदाताको कारोबार स्थापित गर्न ।
प्रशासनिक जटिलता कम गर्न ।
कानूनी प्रकृयालाई सरल र पारदर्शी बनाउन ।
करको हिस्सामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढाउंदै लैजान ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति हो ?
१३ प्रतिशत ।
के मूल्य अभिवृद्धि करले वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि गर्दछ ?
गर्दैन । यो उपभोक्ताले वस्तु र सेवा उपभोग गरे वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने कर हो । तसर्थ सिधा अर्थमा मूल्य वृद्धि गरेको देखिएतापनि वस्तु र सेवाको मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र कर लाग्ने हुँदा मूल्य वृद्धि हुँदैन ।
नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रशासन कुन कार्यालयले गर्छ ?
आन्तरिक राजस्व विभाग र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ ?
कानूनको परिपालना ।
करकट्टी पाईने कारणले अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।
सरकारी कार्यालयसँग कारोबार गर्न पाईने हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन्छ ।
कर बिजक भनेको के हो ?
सामान्य अर्थमा कर बिजक भनेको मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको व्यक्तिले कर समेत देखिने गरी जारी गर्ने बील हो । बिजकले दर्ता भएको ब्यक्तिले गरेको कर योग्य कारोबारलाई प्रमाणित गर्दछ र तिनको कर दायित्व गणना गर्न सघाउ पनि पुर्‍याउंछ । प्रत्येक बिजकमा तीन प्रति हुनुपर्छ । पहिलो प्रतिमा कर बिजक उल्लेख गरिएको हुनु पर्छ । पहिलो प्रति सम्वन्धित खरीदकर्तालाई दिनु पर्छ । दोश्रो प्रति कर प्रशासनले मागेको बखत उपलब्ध गराउने गरी दर्ता भएको ब्यक्तिले अभिलेखमा राख्नु पर्छ । तेश्रो प्रति दर्ता भएको ब्यक्तिले आफ्नो कारोबारको लेखांकनका लागि राख्दछ । यसै तेश्रो प्रतिको माध्यमबाट करदाताले आफ्नो बिक्रि खाता प्रविष्ट गर्ने र लेखा राख्ने गर्दछ ।
कुन समयमा बिजक जारी गर्नु पर्दछ ?
वस्तुको आपूर्तिको हकमा क्रेताले बिक्रेताको कारोवार स्थलबाट वस्तु उठाएको वा ग्रहण गरेको समय वा वस्तुको प्रतिफल प्राप्त गरेको समय, जुन पहिला हुन्छ, सोही समयमा ।
सेवाको आपूर्तिको हकमा सेवा प्रदान भएको बखत वा सेवा को प्रतिफल प्राप्त गरेको समय, जुन पहिला हुन्छ, सोही समयमा ।
करार बमोजिम किस्ताबन्दी रुपमा कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्य एक भन्दा बढी दिनमा आंशिक रुपमा भुक्तानी हुने व्यवस्था भएकोमा भुक्तानी भएको वा करारमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको दिन मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो समय,
कर बिजक प्रमाणित गराउनु पर्दछ ?
बीजक कति प्रति तयार गर्नु पर्दछ ?
सामान्यतया ३ प्रति ।
मलाई ६ प्रति बीजक आवश्यक पर्छ, के मैले ६ प्रति तयार गर्न मिल्छ ?
मिल्छ । सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको स्वीकृती लिएर जारी गर्न मिल्छ ।
बिजकको सि.नं. कसरी राख्नु पर्दछ ?
सिरियल नम्बर १ बाट शुरु गर्नुपर्दछ र क्रमैसँग राख्नुपर्दछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा नयाँ सिरियल नम्बर कायम गर्नुपर्दछ । अर्थात एक आर्थिक वर्ष समाप्त भई अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा पुरानो सि.नं. जति पुगेको भएपनि बिजकको सिरियल नम्बर १ बाट शुरु गर्नुपर्दछ ।
मेरो विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू रहेका छन, मैले बिजकको सि.नं. कसरी राख्ने ?
प्रत्येक शाखाका लागि छुट छुट्टै सिरियल नम्बर १ बाट शुरु गर्नुपर्दछ र क्रमैसँग राख्नुपर्दछ । प्रत्येक वर्षको शुरुमा नयाँ सिरियल नम्बर कायम गर्नुपर्दछ। अर्थात एक आर्थिक वर्ष समाप्त भई अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा पुरानो सि.नं. जति पुगेको भएपनि बीजकको सिरियल नम्बर १ बाट शुरु गर्नुपर्दछ ।
मेरो एउटा दर्ता नम्वरमा विभिन्न फरक फरक कारोवार रहेका छन्, मैले एकै खालको बीजक जारी गर्न समस्या पर्छ । मैले के गर्ने ?
तपाईंको कारोबार स्पष्ट छुट्टिने छ भने प्रत्येक छुटाछुट्टै कारोबारका लागि सिरियल नम्बर १ बाट शुरु गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तो एउटा स्थायी लेखा नम्वरबाट फरक फरक नाममा कारोवार छ भने (ठेक्का व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय र उद्योग) छुट्टाछुट्टै कारोवारका लागि छुट्टाछुट्टै सिरियल नम्वर १ बाट बिजक जारी गर्न सकिन्छ ।
म कम्प्युटरबाट बिजक जारी गर्न चाहन्छु, मैले के गर्नु पर्दछ ?
तपाईंले प्रयोग गर्न चाहेको सफ्टवेयरको विस्तृत विवरण सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ यस्तो सफ्टबेयर आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत भएको हुनुपदर्छ । कार्यालयबाट स्वीकृती प्राप्त गरेर मात्र कम्प्युटरबाट बिजक जारी गर्न पाईन्छ । सफ्टवेयरमा ऐनले तोकेको ढाँचामा कर बिजक जारी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । एकपटक जारी भईसकेको बिजक मेट्न नमिल्ने हुनु पर्दछ । संशोधन गर्नु पर्ने भएमा डेबिट नोट वा क्रेडिट नोटका माध्यमले मात्र संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
मैले कम्प्युटरबाट संक्षित कर बिजक जारी गर्ने स्वीकृती लिएको छु मैले कर बिजक जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कम्प्युटरबाट संक्षित कर बिजक जारी गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्तिले के के गर्नु पर्दछ ?
सक्कल बिजकको नक्कल प्रति तयार गरी राख्नु पर्ने,
टिलरोलको प्रतिलिपि राखी कारोबार गरिएकोमा प्रत्येक दिन सोको जोड गरी राख्नु पर्ने,
प्रत्येक कारोबारको कर समेतको मूल्यको अभिलेख राख्ने ।
संक्षिप्त कर बिजकमा कर सहितको मूल्य राखिएको हुन्छ, यस अवस्थामा कारोवार मूल्य र कर रकम कसरी निकाल्ने ?
संक्षिप्त कर बिजकबाट करको कूल अंक बिजक मूल्यलाई कर भिन्नले गुणन गरी निकालिन्छ ।
कर भिन्न = करको दर
करको दर + १००
कम्प्युटरबाट बिजक जारी गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्तिले कुन कुन शर्त पालना गर्नु पर्दछ ?
सफ्टवेयरमा ऐनले तोकेको ढाँचामा कर बीजक जारी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । एकपटक जारी भईसकेको बीजक मेट्न नमिल्ने हुनु पर्दछ । संशोधन गर्नु पर्ने भएमा डेबिट नोट वा क्रेडिट नोटका माध्यमले मात्र संशोधन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत भएका सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
डेबिट नोट/क्रेडिट नोट भनेको के हो ?
आपूर्ति गरएिको बस्तु वा सेवाको मूल्यमा परिवर्तन भएमा, वस्तु फिर्ता हुन आएमा वा अन्य जुनसुकै कारणले विक्रि पश्चात आपूर्ति मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएमा जारी गरिने नोटलाई डेविट वा क्रेडिट नोट भनिन्छ ।
डेबिट नोट/क्रेडिट नोटमा के के कुरा खुलाउनु पर्दछ ?
क्रेडिट वा डेविट नोट जारी गर्नु परेमा त्यस्तो नोटमा स्पष्टसंग क्रेडिट वा डेविट नोट लेखी देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–
(ङ) कारोबारसंग सम्बन्धित कर बिजकको संख्या र मिति,
(ज) क्रेडिट वा डेविट भएको करको रकम उल्लेख गरी मासिक लेखा समेत राख्नुपर्दछ ।
दर्ता भएको व्यापारीले बीजक नदिएमा के हुन्छ? कति जरिवाना लाग्छ?
दर्तावाल व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा क्रेता लाई बिजक नदिएमा प्रत्येक पटक दश हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइने व्यवस्था रहेको छ ।
दर्ता भएको व्यापारीले बीजक जारी नगरेको थाहा भएमा के गर्ने ?
नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयहरुमा जानकारी गराउने ।
रु. १०,००० भन्दा बढीको संक्षिप्त कर बीजक जारी गरियो भने के हुन्छ ?
ऐन उल्लंघन गरेको कसूरमा कर अधिकृतले पटकै पिच्छे रु.१०००। जरिवाना गर्न सक्दछ ।
सामान बिक्री गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम प्राप्त भयो भने कसरी बीजक जारी गर्नु पर्दछ ?
कुनै वस्तु वा सेवाको आपूर्ति गर्दा त्यसको प्रतिफल वापत परिवतर्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिई कर विजक दिंदा कारोबार भएको दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर बमोजिम उक्त विदेशी मुद्रा बराबर हुने नेपाली रुपैयाँको रकम कर विजकमा उल्लेख गरी बिजक दिनु पर्नेछ ।
दर्ता नभएको व्यापारीले कर बिजक जारी गरी मूल्य अभिवृद्धि कर असूल र संकलन गरेमा के हुन्छ ?
दर्ता नभएको व्यक्तिले कर असुल गरेको कुनै कर बिजक जारी गरेमा वा कर संकलन गरेमा वा कर संकलन गरेको कुनै कागजात जारी गरेमा त्यसरी उठाएको कर निर्धारण गरी निजबाट असुल गरिने र उठाएको करको शत प्रतिशत जरिवाना लगाइने व्यवस्था रहेको छ ।
मैले दैनिक रुपमा बिभिन्न गाडीहरुबाट बिभिन्न ठाउमा खुद्रा बिक्री गर्न (retailing)सामान पठाउदा कसरी बिजक जारी गर्नु पर्छ ?
प्रत्येक गाडीका लागि छुट्टाछुट्टै स्टक ट्रान्सफर चलान बनाई सो सम्बन्धी विवरण खातामा प्रविष्ट गरेर माल वस्तु र चलान सँगै लिएर हिड्नुपर्छ र सामान बिक्री भएपछि बिजक जारी गर्नु पर्दछ ।
ऐन नियममा तोकेकै ढाँचामा बीजक जारी गर्नु पर्दछ ?
पर्दछ । तर ऐन नियममा तोकेका कुराका अतिरिक्त आफूलाई चाहिने सूचना समावेश गर्न मिल्छ ।
संक्षिप्त कर बिजक भनेको के हो ?
संक्षिप्त कर बिजक भनेको दर्ता भएको व्यक्तिले जारी गर्ने स्पष्ट रुपमा कर नदेखाइएको (मूल्यमा नै कर समावेश) भएको बिल हो । प्रत्येक बिजकको न्यूनतम तीन प्रति हुनुपर्छ । पहिलो प्रतिमा संक्षिप्त कर बिजक उल्लेख भएको हुनुपर्छ । पहिलो प्रति खरीदकर्तालाई दिइन्छ । दोश्रो प्रति कर प्रशासनले मागेको बखत उपलब्ध गराउने गरी दर्ता भएको ब्यक्तिले अभिलेखमा राख्दछ । यस्तै तेश्रो प्रतिको माध्यमबाट करदाताले आफ्नो बिक्रि खाता प्रविष्ट गर्ने र लेखा राख्ने गर्दछ । यो बीजक करसहितको मूल्य रु.१० (दश) हजारभन्दा बढीको जारी गर्न मिल्दैन । संक्षिप्त कर विजकबाट करकट्टी दावी गर्न पाइने छैन ।
संक्षिप्त कर बिजक जोसुकैले जारी गर्न पाउँछ ?
पाउँदैन । अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताले मात्र सम्बन्धित आ.रा.का.को स्वीकृती लिएर मात्र जारी गर्न पाउँछ ।
कर कट्टी भनेको के हो ?
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको कुनै पनि करदाताले आफूले कारोवार गरेको कुनै बस्तु तथा सेवाको विक्रीमा संकलन गरेको कर (Output Tax) बाट पहिले त्यस्तो बस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको कर (Input Tax) कटाएर बांकी रहेको रकम मात्र सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ । यसरी बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरीदमा तिरेको कर कट्टा गर्न पाउने व्यवस्थालाई कर कट्टी (Tax Credit) भनिन्छ ।
कुन कुन वस्तुमा तिरेको कर कट्टी दावी गर्न पाइन्छ ?
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले आफ्नो व्यवसायिक कारोवारको सिलसिलामा खरीद वा पैठारी गरेका कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, पैकिंग सामान, पुनर्विक्रीका सामान, मेशिनरी औजार, इक्विपमेन्ट, अफिस सामान, टेलिफोन महसुल, सवारी साधन र संचार व्यवस्था लगायतका व्यावसायिक कारोवारसंग सम्बन्धित सबै किसिमका खर्चहरुमा कर कट्टी गर्न दावी गर्न पाइन्छ ।
कुन कुन वस्तुमा तिरेको कर कट्टी दावी गर्न मिल्दैन ?
व्यावसायिक र ब्यक्तिगत दुबै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने देहाय बमोजिमका वस्तु तथा सेवाहरुमा तिरेको कर कट्टी दावी गर्न मिल्दैन ।
(ख) अल्कोहल वा अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थ जस्तै रक्सी, वियर,
(ग) मनोरन्जन खर्च ।
तर उल्लेखित वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्ति गर्ने कार्य नै मुख्य व्यवसाय रहेको खण्डमा भने पूर्ण रुपमा कर कट्टी दावी गर्न पाईन्छ ।
म कर छुट र कर योग्य दुवै कारोवार गर्दछु, के मैले खरीदमा तिरेको सबै कर कट्टी दावी गर्न पाउँछु ?
पाईदैन । करयोग्य र करछुट भएका वस्तु वा सेवा दुवैको कारोवार गरेको अवस्थामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित खरीद वा आयातमा तिरेको कर मात्र कट्टी गर्न पाउंदछ । तर यदि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्रीसंग खरीद वा आयात भएका वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएको खण्डमा करदाताले बिक्री गरेको कुल मूल्य मध्ये कर लाग्ने कारोवारको मूल्यको समानुपातिक हिसावबाट खरीद वा आयातमा तिरेको कर कट्टी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
कुन कुन वस्तुमा तिरेको कर आँशिक रुपमा कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ?
व्यावसायिक र ब्यक्तिगत दुबै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अटोमोवाइल्स खरीदमा खरीद मूल्यको ४० प्रतिशत मात्र कर कट्टी गर्न पाइन्छ । यस प्रयोजनका लागि अटोमोवाइल्स भन्नाले तीन वा सोभन्दा बढी पांग्रा भएको सडकमा गुड्ने यात्रुवाहक सवारी साधन सम्झनु पर्छ । यद्यपी अटोमोवाइल्सको आपूर्ति गर्ने कार्य नै मुख्य व्यवसाय रहेको खण्डमा भने पूर्ण रुपमा कर कट्टीको सुबिधा पाइन्छ ।
म सानो खुद्रा विक्रेता हुँ, के मैले निजी प्रयोजनका लागि किनेको गाडीमा तिरेको VAT कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ?
मिल्दैन । व्यावसायिक र ब्यक्तिगत दुबै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने खरीद मूल्यको ४० प्रतिशत मात्र कर कट्टी गर्न पाइन्छ ।
म कर छुट र कर लाग्ने कारोवार दुवै गर्दछु, मैले कर कट्टी दावी कसरी गर्नु पर्छ ?
करयोग्य र करछुट भएका वस्तु वा सेवा दुवैको कारोवार गरेको अवस्थामा कर लाग्ने वस्तु वा सेवासंग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित खरीद वा आयातमा तिरेको कर मात्र कट्टी गर्न पाउंदछ । तर यदि कर लाग्ने वस्तु वा सेवाको बिक्रीसंग खरीद वा आयात भएका वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएको खण्डमा करदाताले बिक्री गरेको कुल मूल्य मध्ये कर लाग्ने कारोवारको मूल्यको समानुपातिक हिसावबाट खरीद वा आयातमा तिरेको कर कट्टी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
मैले खरीद गरेको वस्तु वाटोमा ल्याउदा ल्याउदै चोरी/आगलागी भयो मैले कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कुनै वस्तु आगजनी, चोरी, दुघर्टना, टुटफुट, ध्वंसात्मक गतिविधिका कारणले हानी नोक्सानी हुन गई त्यस्तो वस्तुको मौज्दातबाट लगत कट्टा गर्नु परेमा वा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक प्रमाण सहित त्यस्तो अवस्था भएको मितिले ३० दिनभित्र त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ । त्यस्तो निबेदन उपर कर अधिकृतले छानबिन गरी कर कट्टी गर्न दिन सक्नेछ । बीमा गर्नु भएको छ भने बीमा कंपनीबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिको हदसम्म स्वयंले कर कट्टी गर्न सक्नु हुनेछ ।
मैले कर कट्टी लिइ सकेको वस्तु उपयोगको म्याद समाप्त भएको कारणले विक्री गर्न सकिएन, यस्तो वस्तुलाई मैले के गर्ने ?
डेबिट नोट जारी गरेर सो वस्तु फिर्ता गर्न सकिन्छ ।
मैले बैंकको स्वामित्व रहने गरी (Hire Purchase Scheme) अन्तर्गत सवारी साधन खरीद गरेको छु, मैले कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ?
खरीद गरेको सामानको कर कट्टी कति अवधि भित्र दावी गरी सक्नु पर्दछ ?
खरिद गरेको मितिले एक वर्ष भित्र ।
म दर्ता हुनु भन्दा अघि कर तिरी खरीद गरेको केही सामान मौज्दातमा छ, यस्तो सामानको कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ? मिल्छ भने कसरी गर्ने ?
मिल्छ । करदाताले आफू दर्ता हुंदाका बखत मौज्दातमा रहेका वस्तुमा लागेको कर कट्टी गर्नको लागि नियमावलीको अनुसूची – १६ बमोजिमको ढांचामा कर अधिकृत समक्ष निबेदन दिनु पर्छ । यसरी कर कट्टीको दाबी गर्दा कर तिरेको बिजकहरु र अन्य प्रमाण कागजातहरु दर्ता भएको १५ दिनभित्र पेश गरी सक्नु पर्दछ ।
करदाताद्वारा गरिएको दाबी उपर कर अधिकृतले छानबिन गरी स्वीकृत भए पछि मात्र करदाताले कर कट्टीको सुबिधा पाउंदछ ।
कर कट्टी दावी गर्न के कागजातहरू चाहिन्छ ?
कर बिजक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । तर निजी आवादी, निजीवन, सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनको काठ लिलामी तथा बिक्री एवं स्थानिय निकाय वा नेपाल सरकारले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा र ऐनको दफा ८(२) बमोजिम कर असुल गरेकोमा भने कर बिजक नभए पनि राजस्व भौचरका आधारमा सम्बन्धित करदाताले कर कट्टीको सुबिधा पाउनेछ ।
आयात गरिएको वस्तुको कर कट्टी दावी गर्न के के कागजात चाहिन्छ ?
भन्सार प्रज्ञापन पत्र, नगदी रसीद, सामानको बिजक तथा भन्सारको बाटोभई आयात नहुने सेवाको आपूर्तिको हकमा सेवाको बिजक र भुक्तानीको प्रमाण सम्बन्धी कागजातहरु ।
दर्ता नभएको व्यक्तिबाट खरिद गरेको सामानको कर कट्टी दावी गर्न पाइन्छ ?
मैले खरीद गरेको वस्तु वाटोमा ल्याउदा ल्याउदै चोरी/आगलागी भयो । बीमा कम्पनीले आंशिक मात्र क्षतिपूर्ति दिएको छ, मैले पुरै कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तपाईंले पुरै कर कट्टी दावी गर्न मिल्दैन । बीमा गर्नु भएको छ भने बीमा कंपनीबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिको हदसम्म स्वयंले कर कट्टी गर्न सक्नु हुनेछ । बीमा नगरेको वस्तुको हकमा आवश्यक प्रमाण सहित त्यस्तो अवस्था भएको मितिले ३० दिनभित्र त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर कट्टी गर्नको लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्दछ । त्यस्तो निबेदन उपर कर अधिकृतले छानबिन गरी कर कट्टी गर्न दिन सक्नेछ ।
मैले जिल्ला बन कार्यालयबाट काठ खरिद गरेको छु, कार्यालयले कर बीजक दिएको छैन, मैले कसरी कर कट्टी दाबी गर्ने ?
कर बिजक नभए पनि कर बुझाएको राजस्व भौचरका आधारमा कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ |
मैले दर्ता नभएको विदेशीबाट सेवा प्राप्त गर्दा भुक्तानीका बखत कर असुल गरेकोमा उसले कर बीजक दिएको छैन मैले कसरी कर कट्टी दाबी गर्ने ?
कर बिजक नभए पनि कर बुझाएको राजस्व भौचरका आधारमा कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ ।
कुनै वस्तु आयात गर्दा धरौटी राखी आयात गरिएको भए कहिले कर कट्टी दावी गर्नु पर्छ ?
आयात गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम नभएसम्म त्यस्तो वस्तु वा सेवामा तिरेको कर कट्टी गर्न पाइदैन । कुनै वस्तु आयात गर्दा धरौटी राखी आयात गरिएको भए सदरस्याहा भएको अर्थात मूल्य एकिन भएका मितिले एक बर्षसम्म मात्र कर कट्टी दावी गर्न सकिन्छ ।
मैले खरीद गरेको वस्तुको बीजक हरायो, मैले कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
तपाईंले प्रमाणित प्रतिलिपी बीजकका आधारमा कर कट्टी दावी गर्न मिल्छ तर बीजक हराए वापत जरिवाना भने तिर्नुपर्दछ ।
कर फिर्ता भनेको के हो ?
दर्तावाल व्यक्तिले आफूले उठाएको कर खरिदमा तिरेको करमा मिलान नभई बांकि रहेको अवस्थामा फिर्ता पाउने गरी गरिएको व्यवस्था हो । साथै दर्ता भएको व्यक्ति बाहेक करको भार बहन गर्नु नपर्ने कुटनीतिज्ञ/कुटनीतिक नियोग र कर छुटको सुविधा प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई उनीहरुले खरिद गरेको बस्तु वा सेवामा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर फिर्ता गरिन्छ ।
सरकारी राजस्वमा जम्मा भइसकेको कर पनि फिर्ता पाइन्छ ?
कुन कुन अवस्थामा VAT फिर्ता पाइन्छ ?
महिनाभरीको कूल विक्रिमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गरी विक्रि गर्ने दर्ता भएको नियमित निकासीकर्ताले खरिदमा तिरेको वा तिर्नुपर्ने कर आफूले उठाएको करमा मिलान हुन नसकी बांकि रहेको कर ।
लगातार ४ (चार) महिनासम्म मिलान हुन नसकेको कर ।
नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनैतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संस्थामा कार्यरत कूटनैतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छूटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपाल स्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय नियोगतथा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपाल राज्यभित्र तिरेको करको रकम ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम,
संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका सदस्य संस्था एवम् विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम नेपाल भित्र आयोजना संचालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम,
भूलबाट असुल गरिएको करको रकम ।
कूटनीतिक निकाय वा कूटनीतिज्ञले करलाग्ने वस्तु वा सेवा खरिदगर्दा तिरेको कर एक पटकमा दशहजार रुपैयां भन्दा कमको खरिदमा फिर्ता हुदैन ।
कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैड्ढ खातामा फिर्ता गरिने व्यवस्था छ ।
नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले पच्चिस हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरी आफुसँग लगेमा त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर ।
कुनै वस्तु पुनः निर्यात भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सारमा दाखिला गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको धरौटी रकममध्ये सो वस्तु पुनः निर्यात भएको प्रमाणको आधारमा हुने रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।
कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवतर्य मुद्रामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको सार्वजनिक निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएको वस्तु वा सेवा वा वस्तु तथा सेवा बापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिला भएको कर बापतको रकम लगातार चार महिनासम्म मिलान गर्दा मिलान हुन नसकी बढी दाखिला भएको त्यस्तो रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता दिइनेछ ।
औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ‚ सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ्ग मेटेरियल स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रूपमा फिर्ता पाउन निवेदन दिएमा फिर्ता दिइनेछ ।
VAT फिर्ताका लागि आवेदन कति समयभित्र दिनु पर्दछ ?
कारोवार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त दिई सक्नु पर्दछ ।
दर्तावाल व्यक्तिले VAT फिर्ताका लागि आवेदन गर्दा के के कागजात चाहिन्छ ?
कर विवरण (अनुसूची-१०) बाट फिर्ता माँग गरी कर परिक्षणका बखत अन्य कागजात बुझाउनुपर्छ ।
फिर्ता माग गरेपछि ऐनले तोकेको म्याद भित्र कर फिर्ता पाइएन भने के हुन्छ ? के मैले व्याज दावी गर्न सक्छु ?
वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतको दरले ब्याज पाईन्छ । यस्तो ब्याज रकम फिर्ता माग गरेको मितिले साठी दिनपछि मात्र गणना गरिनेछ ।
कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कुन कुन अवस्थामा कर फिर्ता दिइन्छ ?
कुटनीतिज्ञ वा कुटनीतिक नियोगले स्थानीय बजारमा कर लाग्ने बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर (एक पटकमा १०,०००।- रुपैयां भन्दा कमको खरिदमा तिरेको कर बाहेक अन्य) फिर्ता पाउंछन् ।
कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर फिर्ता माग गर्न के के कागजात चाहिन्छ र प्रक्रिया के हो ?
कुटनीतिज्ञले परिचयपत्रको प्रतिलिपि सहित आफ्नो कुटनीतिक नियोगमार्फत नियमावलीको अनुसूची १७ भरी फिर्ता दावी गर्नुपर्छ,
परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखामार्फत आन्तरिक राजस्व विभागको कर फिर्ता शाखामा वा सम्वन्धित आ.रा.का मा फिर्ता दावी गर्नुपर्नेछ परराष्ट्र मन्त्रालयले पारस्पारिकता छ भनी सिफारिश गरेको हुनुपर्नेछ ,
कर फिर्ता दावीसंगै कर तिरेको सक्कल विजक र तिनीहरुको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्छ,
हाल Online System बाट समेत कागजातहरु पेश गरी कर फिर्ता माग गर्न सकिन्छ ।
पर्यटकलाई कुन कुन अवस्थामा कर फिर्ता दिइन्छ ?
नेपाल भ्रमण गरी हवाइ मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले रु.२५,०००।- (पच्चिसहजार रुपैयां) भन्दा बढीको कर लाग्ने बस्तु खरिद गरी आफूसंग लगेमा त्यस्तो बस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिईनेछ ।
कर फिर्ता माग गर्ने कुरा (अनुसूची–१०) कर विवरणमा लेख्न छुट भएछ, के मैले सोझै निवेदन दिएर कर फिर्ता माग गर्न सक्छु ?
सक्नुहुन्न । दर्तावाल करदाताले कर विवरण (अनुसूची–१०) बाट नै कर फिर्ता माग गर्नु पर्दछ ।
दर्तावाल व्यक्तिसँग स्टकमा रहेको सामानको VAT फिर्ता पाउँछ ?
विद्युतिय माध्यामबाट भूक्तानी गर्ने व्यक्तिलाई कर फिर्ता कसरी गरिन्छ ?
कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतिय माध्यामबाट भूक्तानी गरेमा नीजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भूक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम नगद प्रोत्साहन स्वरुप निजको वैंक खातामा फिर्ता गरिन्छ ।
पुनः निर्यात भएका वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता पाईन्छ ? कि पाईदैन ?
फिर्ता पाईन्छ ।